ဘော့စ်နီယားဂျင်နိုဆိုဒ်(၁) | Civil Rights Movement
၁၉၈၀ လောက်ကသာ ခင်ဗျားဟာ ယူဂိုဆလားဗီးယားကိုရောက်သွားရင် စိုပြည်နေတဲ့ကွင်းပြင်တွေ၊ စိမ်းလန်းနေတဲ့တောင်ကုန်းတွေကနေစီးဆင်းပြီး ကွင်းပြင်ထဲကို ဖြတ်သန်းနေတဲ့ မြစ်ချောင်းတွေ၊ အဲ့ဒီမြစ်ချောင်းတလျှောက်ပေါက် နေတဲ့ ဘယ်ရီချုံပင်တွေနဲ့ သာယာနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံကိုမြင်ရမှာပါ။ မြို့ပြတွေဟာလည်း တိုက်ကြီးတာကြီးသပ်သပ်နဲ့ ဆောက်ထားတဲ့ ကွန်ကရစ်မြို့တွေ မဟုတ်ဘဲ ရှေးဟောင်းဗလီ၊ ချာခ်ျကျောင်း၊ တံတား၊ ပြတိုက်တွေနဲ့၊ သစ်ပင်တွေနဲ့ စိမ်းလန်းသာယာနေပြီး အဲ့ဒီမြို့တွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာလည်း ဘော့စ်နီးယန်းမွစ်စလင်မ်၊ ကတ်သလစ်ခရိုအတ်၊ အော်သိုဒေါက်စ်ဆာဘ် အစရှိသဖြင့် အသွေးစုံဘာသာစုံနဲ့ ချစ်ခင်စိုပြည်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။
လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု အပြန်အလှန် လက်ထပ်တာတွေကလည်း အတော်လေးရှိတာမို့ ယူဂိုဆလာဘ်ပြည်ထောင်စုလူမျိုးရယ်လို့ခံယူသူတွေကလည်း ၁၀ ယောက်မှာ ၁ ယောက်နှုန်းရှိပါတယ်စီးပွားရေးအရပြေလည်ပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းရှိတဲ့ ပြည်ထောင်စု ကို ဒေါက်တိုင် ၃ ခုနဲ့ ထောက်မထားပါတယ်။ ပါတီ၊ တပ်မတော်နဲ့ ဖက်ဒရယ်သမ္မကောင်စီလို့အကြမ်းဖျင်းပြောလို့ရပါတယ်။
ပါတီ ရှစ်ဖွဲ့ရှိပြီး republic ၆ နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၂ ခု အလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ပါတီအားလုံးဟာ ကွန်မြူနစ်ပါတီတွေပါ။ republic ၆ ခုက
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၂ ခုက ကိုဆိုဗိုနဲ့ ဘော့ဂ်ျဗိုဒီးနားဖြစ်ပီး ဆားဘီးယား republic အတွင်းမှာ တည်ရှိပါတယ်။ Republic ၆ ခု + ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၂ ခု ပေါင်းပြီး Federal Union = ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ထားတာပါ။ Republic ၆ ခုမှာ ဆားဘီးယားနဲ့ မွန်တီနီဂရိုးတို့ဟာ ဆာဘ်လူမျိုးတွေပဲ အဓိကနေထိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရပြီး ဘောစ်နီးယားနဲ့ ခရိုအေးရှားမှာလည်း ဆာဘ်လူမျိုးတွေက အတိုင်းအတာတခုထိ ပျံ့နှံ့နေထိုင်ပါတယ်။
အမြဲတန်းတပ်မတော်က ယူဂိုဆလာဘ်ပြည်သူ့တပ်မတော်လို့ခေါ်တဲ့ JNA ပါ။ JNA ကို ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်လို့သတ်မှတ်ပြီး အရန်အင်အား အပါအဝင် အင်အား ၁ သန်းကျော်အထိ စုဖွဲ့နိုင်ပါတယ်။ JNA မှာလည်း အင်အားရဲ့ ၆၀ % က ဆာဘ်တွေပါပဲ။ JNA အပြင် နောက်ထပ်ရှိတဲ့ တပ်တစ်မျိုးကတော့… ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်လို့ခေါ်တဲ့ Territorial Defence Force ပါ။ ဒီ TDF တပ်ကတော့ republic အလိုက်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဒေသအလိုက်လူဦးရေနဲ့အဓိကဖွဲ့ပါတယ်။
ဥပမာ – Bosnian Territorial Defence Force မှာဆိုရင် ဘော့စ်နီးယန်းလူမျိုးတွေပဲ အဓိကပါဝင်ပါတယ်။ အင်အားကတော့ ၁ သောင်းကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိပါတယ်။
ဒီကောင်စီဟာ ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကိစ္စတွေကို အဓိက အဆုံးအဖြတ်ပေးပါတယ်။ ဥပမာ – JNA တပ်တွေကို စစ်ဆင်ခွင့်ပေးဖို့ ကိစ္စမျိုးပါ။ ကောင်စီရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကို မဲ ၈ မဲ နဲ့ ချမှတ်ပါတယ်။ republic ၆ ခုနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ခွင့်ရဒေသ ၂ ခုဟာ ကိုယ်စီ ၁ မဲစီပေးခွင့်ရှိတာမို့ အားလုံးတန်းတူညီမျှလို့ ပြောရမှာပါ။
၁၉၈၇ မှာ ဆားဘီးယားသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ မီလိုဆီဗစ်ပါ။ ဆားဘီယားrepublic အတွင်းက ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၂ ခုနဲ့ နောက်ထပ် ဆာဘ်တွေအဓိကနေထိုင်ရာ မွန်တီနီဂရိုးrepublic မှာ အကြမ်းဖက် အာဏာသိမ်းပြီး ဖက်ဒရယ်သမ္မတကောင်စီမှာ ဆာဘ်အတွက် အခိုင်မဲ ၄ မဲကို ဇွတ်လုပ်ယူလိုက်တဲ့အခါ မျှခြေဟာ ပျက်စီးသွားပြီး ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲရေး စတင်ပါတော့တယ်။
ယူဂိုဆလားဘီးယားအကြောင်း ဖတ်တိုင်း ကျွန်နော်တို့အတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေတာက သူ့ရဲ့ဖက်ဒရယ် တည်ဆောက်ပုံပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဖက်ဒရယ်နဲ့ ဘယ်တုန်းကမှ မနီးစပ်တဲ့အပြင် ဖက်ဒရယ်ဆိုတာ မြွေလိုအဆိပ်ရှိတဲ့သဘောမျိုးတောက် လျှောက်အသင်ခံလာရလို့ပါပဲ။
ဒီတော့ ဖက်ဒရယ်အကြောင်း ဘာမှမသိတဲ့သူတွေကို မီလိုဆီဗစ်က ဖက်ဒရယ်စနစ်ပေါ်မှာ အမြတ်ထုတ်ကစားရင်း အာဏာယူသွားတာမျိုးရှင်းပြဖို့က ပိုခက်ပါတယ်။ ဗမာပြည်မှာကတော့ရှင်းပါတယ်။ ၁၉၆၂ မှာ ဗမာစစ်တပ်က ဒဲ့အာဏာသိမ်းပစ်လိုက်ပြီး လုပ်ချင်ရာ လုပ်သွားခဲ့တာမို့ မီလိုဆီဗစ်လောက်ကတော့ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးလို့ ပြောရမှာပါ။
စာမတတ်တဲ့ တောသားတွေနေတဲ့တိုင်းပြည်မို့ တောတွင်းဓလေ့အတိုင်း လက်နက်ပြ အာဏာသိမ်းသွားတာမျိုးပါ။ မီလိုဆီဗစ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးကစားကွက်မျိုးဟာ ဗမာဗားရှင်းနဲ့ပြန်ယှဉ်ကြည့်ရင် အတော်နူးညံ့တယ်လို့တောင်ဆိုရမှာပါ။
ယူဂိုဆလားဘီးယားက JNA တပ်မှာ ဆာဘ်လူမျိုးက ၆၀%လောက်သာ အုပ်စီးထားပေမယ့် ဗမာစစ်တပ်မှာကတော့ ၉၉%က ဗမာချည့်ပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်ဆီက လွတ်လပ်ရေးရခါစက ကချင်၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ကယား၊ ဂေါ်ရခါး ရိုင်ဖယ်တပ်ရင်းတွေရှိပေမယ့် ဖက်ဒရယ်တပ်ပုံစံ မတည်ထောင်တော့ဘဲ ဗမာတပ်ပုံစံပဲ တည်ထောင်လိုက်ပါတယ်။
အဓိကအကြောင်းပြတာကတော့ လွတ်လပ်ရေးရခါစ ကရင်ပုန်ကန်မှုကိုပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီပုန်ကန်မှုအတွင်း ကချင်၊ ချင်း၊ ကယားနဲ့ ဂေါ်ရခါးတပ်ရင်း တွေက ပြည်ထောင်စုအပေါ် သစ္စာစောင့်သိခဲ့တာကိုတော့ တစ်ချက်လေးမှ မထောက်ထားဘဲ ဗမာစစ်တပ်သပ်သပ်တည်ထောင်ပစ်တာပါ။ ဒီလို ဗမာတပ်သပ်သပ်အဖြစ်တည်ဆောက်မှုဟာ ၁၉၆၂ မတိုင်ခင် ပါလီမန်ခေတ်ကတည်းကပါ။
ဆာဘ်တွေလောက်ကတော့ ဗမာက ပျင်းတောင်ပျင်းသေးဆိုရမှာပါ။ ဗမာက တခြားလူနည်းစုတွေကို ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်မျိုးဖွဲ့ခွင့်ပေးဖို့မပြောနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တောင်ဖွဲ့ခွင့်မပေးပါဘူး။ ယူဂိုဆလားဘီးယားဟာ ၁၉၉၀ လောက်မှ သစ်ချောက်ကုန်း ဖြစ်သွား တာဖြစ်ပြီး ချက်ချင်းခွဲထွက်လို့ သာယာတဲ့ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်တွေတည်ဆောက်ကုန်ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကတော့ ၁၉၆၂ က စပြီး သစ်ချောက်ကုန်းဖြစ်ခဲ့ကာ ခုထိလည်း သစ်ချောက်ကုန်းမှာ ငုပ်တုပ်ထိုင်ဆဲပါပဲ။
မီလိုဆီဗစ်က မျှခြေကို ဖျက်စီးလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ ယူဂိုဆလားဗီးယားရဲ့ အနောက်ဘက်စွန်းက ဆလိုဗေးနီးယား republic ဟာ ဆယ်ရက်ကြာစစ်ပွဲဖြစ်ပြီး လွတ်လပ်ရေးကြေငြာသွားပါတယ်။ ဆလိုဗေးနီးယားမှာ ဆာဘ် တွေမရှိလို့ အေးအေးသက်သာနဲ့ ခွဲထွက်ခွင့်ရသွားတယ်လို့ပြောရမှာပါ။
သိပ်မကြာခင် ၁၉၉၁ နှစ်လည်ပိုင်းမှာ ခရိုအေးရှားကပါ လွတ်လပ်ရေး ကြေငြာတဲ့အခါမှာတော့ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံတွင်းက ဆာဘ်လူမျိုး ၆ သိန်းကျော်ဟာ ခရိုအေးရှားအစိုးရကို ဆန့်ကျင်ပါတော့တယ်။ ဒီဆာဘ်လူမျိုးတွေဟာ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ဘက်မှာ နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီး သူတို့ဟာ ဆားဘီးယားနဲ့ ဘောစ်နီးယားကို ကပ်ရပ်ကျောပေးထား ကြသူတွေပါ။
သူတို့ရဲ့နောက်ကျောတည့်တည့်ကနေ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပြီး ပုန်ကန်မှုကို သွေးထိုးပေးနေသူကတော့ မီလိုဆီဗစ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းတုန်းက အဲ့ဒီဒေသတွေမှာဆာဘ်နဲ့ ခရိုအတ်တွေဟာ အပြန်အလှန်မျိုးဖြုတ်သတ်ပွဲတွေလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ သမိုင်းကလည်းရှိတော့ သွေးထိုးလို့ ကောင်းတဲ့ အကွက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ခရိုအေးရှားကဆာဘ်တွေဟာ မြို့ချင်းဆက်လမ်းမကြီးတွေကို အတားအဆီးချပိတ်ဆို့ပြီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖွဲ့ကာ ကင်းလှည့်နေပါ တော့တယ်။ ခရိုအေးရှား အစိုးရယန္တယား ထိခိုက်သွားပါတယ်။ အဆိုးဆုံကတော့ ခရိုအေးရှားခရီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့ အခြေတည်ရာ ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုသွားတဲ့ လမ်းတွေကို ဆာဘ်တွေက ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက် စီးပွားရေးပါထိလာတော့ ခရိုအေးရှားအစိုးရက ဆာဘ်ပုန်ကန်မှုကိုနှိမ်နင်းဖို့ လုပ်ပါတယ်။ ရဟတ်ယာဉ်အပြည့်နဲ့ တင်ဆောင်လာတဲ့ ခရိုအတ်အထူးရဲတပ်ဖွဲ့တွေဟာ ဆာဘ်ပုန်ကန်မှုကို နှိမ်နင်းဖို့ထွက်အလာမှာတော့ JNAလေတပ်ရဲ့ တားဆီးမှုကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ ခရိုအေးရှားဟာ နိုင်ငံတွင်းကဒေသခံဆာဘ်တွေလောက်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာမဟုတ်ဘဲ ဆားဘီးယားနိုင်ငံတွင်းက ဗဟိုဆာဘ်အစိုးရနဲ့ပါ ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း ထင်ရှားသွားပါတယ်။
JNA လို အမြဲတမ်းတပ်ကို ခါးပိုက်ဆောင်ထားနိုင်ပီဖြစ်တဲ့ဆာဘ်တွေဟာ လမ်းပိတ်ထားတာလောက်နဲ့ မတင်းတိမ်တော့ပဲ ခရိုအတ်တွေနေထိုင်ရာမြို့ တွေကိုပါ ဝင်သိမ်းပါတော့တယ်။ ဒီလိုသိမ်းပိုက်ရာမှာ ဆာဘ်တွေသုံးတဲ့နည်းဗျူဟာကတော့ ကွက်စိတ်ပြည့် အမြောက်နဲ့ပစ်ခြင်းပါပဲ။ စစ်ဘက်ပစ်မှတ်တွေကို ပစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အရပ်သားတွေနေတဲ့ မြို့တွေကိုပစ်တာပါ။ ဆေးရုံ၊ ကျောင်း၊ ဈေး၊ လူနေရပ်ကွက်တွေကို အသေးစိတ်တကွက်ချင်း အမြောက်နဲ့ စိမ်ပြေနပြေပစ်လိုက်ခြင်းဟာ စစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်သပ်သပ်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ အဲ့ဒီမြို့ကဒေသခံ ခရိုအတ်တွေကို ထွက်ပြေးသွားစေဖို့ပါ။ ဒီနောက် မှာတော့ လူမျိုးရေးအရသန့်စင်တဲ့ ဆာဘ်နယ်မြေတခုကို ရရှိလိုက်ပါပြီ။
အမြောက်ကိုသုံးပြီး ethnic cleansing လုပ်တာပါ။
မနေ့တနေ့ကမှ စစ်တပ်ထဖွဲ့တဲ့ ခရိုအတ်တွေအဖို့ကတော့ အပေါ့စားလက်နက်တွေနဲ့ ကုပ်ကပ်ခုခံရုံမှတပါးဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။ ဆာဘ်တွေအမြောက်ပစ်ချက်ကောင်းလွန်းလို့ ၁၉၉၁ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ Vukovar မြို့က ခရိုအတ်အရပ်သား ၅ ထောင်ကျော်သေသွားပြီး ကျန်တဲ့မြို့သားတွေအားလုံးထွက်ပြေးသွားရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ဆာဘ်တွေက လုပ်လာလိုက်တာ ခရိုအေးရှား အစိုးရအနေနဲ့ ဒီအတိုင်းသာဆက်လွှတ်ထားရင် တစ်နိုင်ငံလုံးဆာဘ်လက်အောက် ရောက်သွားနိုင်တာမို့ UN အနေနဲ့ကြားဝင်ပေးဖို့အားထုတ်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ၁၉၉၁ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ UNတပ်တွေဟာ ဆာဘ်နဲ့ ခရိုအတ်ကြားက ခံစစ်လိုင်းမှာနေရာယူလိုက်ကြပါတယ်။ ၁၉၉၂ နှစ်ဦးပိုင်းမှာတော့ ခရိုအေးရှားရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို ကမ္ဘာက အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံကတော့ ဆာဘ်တွေလက်ထဲမှာ ပဲ့ပါသွားပါပြီ။
ပိုဆိုးတာက UN တပ်တွေကြားထဲမှာထိုင်ထားတဲ့အတွက် ဒီနယ်မြေတွေကို ပြန်သိမ်းဖို့ကလဲ မလွယ်တော့ပါဘူး။ ဆာဘ်တွေဟာ ခရိုအေးရှားမှာ အနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီး ခေါင်းမော့နေပါတော့တယ်။
UN တပ်တွေရဲ့ မျက်မှောက်မှာတင်ပဲ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ခရိုအတ် တွေကိုမောင်းထုတ်ပြီး ethnic cleansing ကို လုပ်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ခရိုအေးရှားစစ်မျက်နှာဟာ နှစ်ဖက်တပ်တွေမျက်နှာချင်းဆိုင် အသင့်ပစ် ခတ်မယ့်ပုံစံနဲ့ ၃ နှစ်လောက် ခေတ္တငြိမ်သက်သွားပါတယ်။
ဆာဘ်တွေဟာ အရပ်သားထောင်ချီကို သွေးအေးအေးနဲ့ စိမ်ပြေနပြေအမြောက်နဲ့ပစ်သတ်နေတာကို ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ အိုဆီဂျက်မြို့မှာ တုန်လှုပ်ခြင်းကြီးစွာမြင်ခဲ့ရသူကတော့ US ဒီိမိုကရက်တစ်လွှတ်တော်အမတ် မက်ကလော့ စကီးပါ။
ပိုဆိုးတာက ဇာဂရက်မြို့မှာ ဆာဘ်တွေဟာ လူ ၄၀ ကို လွှနဲ့တိုက်ပြီးသတ်ဖြတ်သွားတာပါ။ မက်ကလော့စကီးမြင်ခဲ့ရတာတော့ ခြေပြတ်၊ လက်ပြတ် ခေါင်းပြတ်တွေစုပုံထားတာကိုပါ။ အမတ်မင်းဟာ ဆားဘီးယားမြို့တော် ဘဲလ်ဂရိတ်ကို ရောက်တဲ့အခါ မီလိုဆီဗစ်ကို ဒီအကြောင်းတွေပြောပြတော့ မီလိုဆီဗစ်က အပြောတောင်မခံဘဲ ဇွတ်ငြင်းပါတော့တယ်။ ဒီလိုဇွတ်ပိတ်ငြင်းတာဟာ အိုးမလုံအုံပွင့် ပုံစံဖြစ်နေမို့ မက်ကလော့စကီးဟာ ဒီလုပ်ရပ်တွေဘယ်ကလာသလဲပါ ခန့်မှန်းမိသွားပါတယ်။
မက်ကလော့စကီးက ဆားဘီးယားက US သံအမတ်ကို ဒီအကြောင်းတွေပြောပြတော့ သံအမတ်ကြီးက “ခရိုအေးရှားမှာ ဆိုးလှပီထင်တာလား။ ဘောစ်နီးယားမှာဖြစ်လာခဲ့ရင် အဲဒါထက်ပိုဆိုးလိမ့်မယ်”လို့ သတိစကား ဆိုခဲ့ပါသတဲ့။
ခရိုအေးရှားနယ်မြေတွေကို ဆာဘ်တွေက ပေါင်မုန့်လှီးသလို လှီးဖဲ့ယူတာက ဆိုးလှချည့်လို့ပြောရင် ပင်လုံစာချုပ်အရ သီးခြားဖက်ဒရယ်အခွင့်အာဏာရှိတဲ့ ကချင်နဲ့ ရှမ်းပြည်တွေကို ဗမာစစ်တပ်က ဖဲ့ချင်သလိုဖဲ့ လှီးချင်သလို လှီး အလုံးလိုက်မြိုချဖို့အားထုတ်နေတာကျ ဘာဆက်ပြောမလဲ။ ဗမာစစ်တပ်အနေနဲ့ ဒီလို ရာစုနှစ်တဝက်ကျော်မက လုပ်ချင်ရာလုပ် ခွင့်ရနေတာဘာ့ကြောင့်လဲ? အဓိက,ကတော့ နိုင်ငံတကာအာရုံစိုက်မှု မရှိလို့ပါ။
နိုင်ငံတကာက အာရုံစိုက်မှုရှိတဲ့ ခရိုအေးရှားစစ်ပွဲဟာ ၅နှစ်အကြာ ၁၉၉၅ မှာပြီးစီးသွားခဲ့ပြီး နယ်မြေတွေအားလုံး ခရိုအတ်တွေလက်ထဲပြန်ရောက်သွားပါတယ်။ ( နောက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော်ဆက်ရေးပါမယ်။) ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့အချက်ကတော့ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးဆင်နွှဲရာမှာ စစ်ရေးသပ်သပ်နဲ့ အားထုတ်ကြိုးပမ်းတာဟာ စစ်အင်အားကြီးမားတဲ့ ရန်သူကို ဖိုးကြိုင်းတုတ် ဖြစ်သွားစေတတ်ပါတယ်။ လက်နက်အားကောင်းတဲ့သူက လက်နက်နဲ့ရှင်းရလေကြိုက်ပါပဲ။ ဒီအတွက် အကောင်းဆုံး သက်သေကတော့ မြန်မာပြည်က ပြည်တွင်းစစ်ပါပဲ။
ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာကိုထိုးဖောက်လှုပ်ရှားမှုဟာ စစ်ရေးလိုပဲ အရေးကြီးရုံမက စစ်ပွဲတွေအီနေချိန်မှာ အဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ ကဏ္ဍပါဖြစ်လာကြောင်း ပါခင်ဗျား…။
“မင်းတို့မွစ်ဆလင်မ်တွေက ခရိုအေးရှားလမ်းကြောင်းလိုက်ချင်တာလား။ မင်းတို့က စစ်အတွက်ဘယ်လောက်ပြင်ထားလို့လဲ။ စစ်ဖြစ်လာရင် မင်းတို့မွစ်ဆလင်မ်တွေ အပြီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားမယ်ကွ” စသဖြင့် ဒေါသတကြီးနဲ့ကြိမ်းဝါးသံဟာ ဘောစ်နီးယားနိုင်ငံမြို့တော် ဆာရာယေဗိုက ပါလီမန်ခန်းမ ဆောင်အတွင်းကနေ ဟ်ိန်းခနဲထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
စင်မြင့်ထက်ကနေ ဒေါသအိုးပေါက်ကွဲပီးအော်ဟစ်နေတာကတော့ ဘော့စ်နီးယားကဆာဘ်လူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင် ကာရာစ်ဒစ်ဇ်ပါ။ သူပေါက်ကွဲနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်း ၁၉၉၂ မတ်လမှာ ကျင်းပတဲ့ ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ မွစ်ဆလင်မ်ဘော့စ်နီးယန်းတွေနဲ့ ဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံတွင်းက ခရိုအတ်တွေဟာ သီးခြားလွတ်လပ်သော ဘေ့ာစ်နီးယားနိုင်ငံအဖြစ်ခွဲထွက်ဖို့ ဆန္ဒပြုခဲ့ကြလို့ပါပဲ။
ဆာဘ်တွေအနေနဲ့ ဒီဆန္ဒခံယူပွဲကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ပေမယ့်လည်း လူဦးရေအရ မွစ်ဆလင်မ်က ၄၃% နဲ့ ခရိုအတ်တွေက ၁၈% ရှိပြီး ဆာဘ်က ၃၅%သာ ရှိတဲ့အတွက် ခွဲထွက်ရေးကိစ္စဟာ အတည်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘော့စ်နီးယားခေါင်းဆောင်တွေဘက်က ခွဲထွက်ရေးကိစ္စနဲ့ပူးတွဲပြီး နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ လူမျိုးစုတိုင်းအတွက် တန်းတူအခွင့်အရေးပေးတဲ့ ဥပဒေကို တပြိုင်နက်ပြဋ္ဌာန်းပေးထားသော်လည်း ဆာဘ်နိုင်ငံရေးသမားတွေက မကျေနပ်ပါဘူး။ သူတို့လိုချင်တာ တန်းတူညီမျှမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ဘော့စ်နီးယားကို ဆာဘ်တွေက အလုံးစုံချုပ်ကိုင်ခွင့် (သို့မဟုတ်) ဆာဘ်နယ်မြေတွေ ကျယ်နိုင်သမျှကျယ်ကျယ်ရရှိရေးပါ။
ဒီအကြောင်းကို ၁၉၉၂ ဖေဖော်ဝါရီကတည်းက ကာရာဒစ်ဇ်က အင်တာဗျူးတခုမှာ အတိအလင်းပြောပြခဲ့ပြီးသားပါ။ “ကျုပ်တို့လိုတာ Greater Serbia = ကြီးမြတ်လေသော၊ နယ်မြေကျယ်ဝန်းလေသော ဆားဘီးယားနိုင်ငံတော်ပဲ” လို့ ကာရာဒစ်ဇ်က ဒဲ့ပြောခဲ့တာပါ။
ဒီလိုပြောနိုင်အောင်လဲ ဗဟိုဆားဗီးယားနိုင်ငံက ဆာဘ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက် အစီအစဉ်တွေ ဆွဲထားပြီးသားပါ။ ဒါ့ကြောင့် ပါလီမန်လို နေရာမှာ လမ်းဘေးလူမိုက်စကားသံတွေနဲ့ကြိမ်းဝါးနေတာပေါ့။ ကာရာဒစ်ဇ် စကားပြောအပြီးမှာ ဘောစ်နီးယားမွစ်ဆလင်မ်ခေါင်းဆောင်အလီဂျာက စကားစပြောပါတယ်။ အလီဂျာဟာ သူ့ထုံးစံအတိုင်း ခပ်အေးအေးပဲ ပြောချသွားပါတယ်။
“မစ္စတာကာရာဒစ်ဇ်ရဲ့ အပြုအမူတွေ အပြောအဆိုတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘာလို့ ဆာဘ်လွှမ်းမိုးတဲ့နိုင်ငံထဲမှာ မနေချင်ရသလဲဆိုတာရဲ့ သက်သေတွေပါပဲ။ ဒီလိုခက်ထန်တဲ့စကားမျိုးကို ပါလီမန်လိုနေရာမှာလာပြောပြီး . . . . .” စသဖြင့် အလီဂျာကပြောနေတုန်း မွစ်ဆလင်မ်နဲ့ခရိုအတ် အမတ်တွေက လက်ခုပ်ဝိုင်းတီးပြီးထောက်ခံလိုက်ကြပါတယ်။ ကာရာဒစ်ဇ်ကတော့ လက်ခုပ်သံတွေကြားမှာ မတုန်မလှုပ် မြေခွေးမျက်နှာနဲ့ပဲ ဆက်ရှိနေပါတယ်။ သူအနေနဲ့ ဘာမှတုန်လှုပ်စရာလဲမရှိပါဘူး။ ခုဆိုရင် JNA အမြဲတမ်းတပ်က ဆာဘ်စစ်သား ၈ သောင်းဟာကြီးမြတ်လေသောဆားဘီးယားနိုင်ငံကြီးအတွက် အမှုတော်ထမ်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီဆာဘ်စစ်သား၈သောင်းနဲ့အတူ တင့်ကား ၅၁၂စင်း၊ သံချပ်ကာ ၅၀၆ စင်း၊ ဟောင်ဝစ်ဇ်ဇာအမြောက်အပါအဝင် အမြောက်ကြီးအလက် ၂၀၀ ကျော်၊ တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ် ၂၀ ကျော်၊ MIG လေယာဉ်တွေအပါအဝင် တိုက်လေယာဉ်ပျံတချို့ကလည်း အားဖြည့်ထားပါတယ်။
ဒါအပြင် အရန်ပြည်သူ့စစ်တွေ၊ ဆားဘီးယားကရောက်လာတဲ့ စစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေ၊ ထောက်လှမ်းရေးအထူးကွန်မန်ဒိုတပ်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင် ဘော့စ်နီးယားမှာ ဆာဘ်လက်နက်ကိုင်အင်အားဟာ ၂ သိန်းနီးပါးရှိသွားပါတယ်။ ဒီလူသူလက်နက်တွေရဲ့နောက်မှာလည်း အင်အားသန်းဂဏန်းရှိတဲ့ ဆားဘီးယားအမြဲတမ်းတပ်မတော်က အခိုင်အမာရှိနေပြန်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုသားအားလုံးဆီက အခွန်ပိုက်ဆံတွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ စစ်လက်နက်တွေဟာ ဆာဘ်လူမျိုးဖို့ချည်းပဲ ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဘော့စ်နီးယန်းဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေးတပ်က မွစ်ဆလင်မ်စစ်သားတစ်သောင်းပျော့ပျော့ဟာ ဆာဘ်တွေကို ခုခံနိုင်ပါ့မလား? ဘောစ်နီးယန်း မွစ်ဆလင်မ်တွေဟာ တကယ်ပဲ ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ကနေ အပြီးတိုင်ပျောက်ကွယ် သွားလေမလား ?
၁၉၅၈ ကနေ ၁၉၆၂ အတွင်း ပင်လုံသဘောတူညီချက်တွေအရ ရှမ်း၊ ကချင် လူနည်းစုဘက်က ဖက်ဒရယ်အခွင့်အရေးတိုးတောင်းတဲ့ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ယှဉ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရှမ်းတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးကတိကဝတ် ပြဿနာတစ်ရပ်ကို အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြဿနာအဖြစ် အချိန်ဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်။
ဘာကွာလို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံရေးပြဿနာဆိုရင် ပြည်သူ့အင်အား ကိုသုံးလို့ရပါတယ် (ဥပမာ-အလီဂျာလုပ်သလို လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပတာမျိုးပါ။)
အခြေခံ “ဥပဒေ” ပြဿနာဆိုရင် ပါလီမန်တွင်း ပညာရှင်ချင်းဒူးတိုက် ဆွေးနွေးရတဲ့သဘော ဖြစ်သွားပါတယ်။ ပါးပါးလေးကွာတာမဟုတ်ပါဘူး။ အထူကြီးကွာတာပါ။ အဲဒီတုန်းက ရှမ်းပြည်နဲ့ ကချင်ပြည်တွေမှာ ဗမာလူဦးရေ ဘာမှမရှိသေးပါဘူး။ ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ကာရာဒစ်ဇ်လို ဒဲ့သမားတွေ မဟုတ်ပါဘူး။
ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ အပြောချိုချိုနဲ့ အခြေခံဥပဒေပြဿနာ အဖြစ်ပါလီမန်အတွင်းမှာ အချိန်ဆွဲဆွေးနွေးရင်း ၁၉၅၈ မှာ ဗမာစစ်တပ်နဲ့ လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီး နေဝင်းလက်ထဲ အာဏာလွှဲလိုက်ပါတယ်။ ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ကလိမ်ကကျစ်သမားတွေပါပဲ။ အဆုံးမှာတော့ ကလိမ်အကျဆုံးနေဝင်းက အနိုင်ရသွားပြီး ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲမှာကြောက်လို့ အာဏာသိမ်းရကြောင်းဝါဒဖြန့်ပြီး ပြည်တွင်းစစ်ကို ယနေ့တိုင် ဆင်နွှဲခွင့်ရသွားပါတော့တယ်။ စစ်ပွဲဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ လူနည်းစုတွေအပေါ် ဂျင်နိုဆိုဒ်အပါအဝင် ပုံစံမျိုးစုံသော ရာဇဝတ်မှုတွေကို ကျူးလွန်နေပါတော့တယ်။
နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ မတိုက်တတ်ဘူးဆိုရင် ကချင်၊ ရှမ်း၊ ကရင် အပါအဝင်လူနည်းစုတွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်ကမဟုတ်တောင် မြန်မာပြည်မှာတော့ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါတယ်။
လူမျိုးကြီးဝါဒီတွေလက်ထဲ အာဏာနဲ့ လက်နက်ရှိနေရင်
ကာရာဒစ်ဇ်ရဲ့ လူမိုက်ဆန်ဆန်မိန့်ခွန်းအပြီးမှာတော့ ဆာဘ်တွေ ဘက်ကလက်တွေ့ကျကျ ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ပြပါတော့တယ်။ ဒီဒဏ်ကို ပထမဆုံးစတင်ခံစားရတာတော့ ဘောစ်နီးယားနိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ပိုင်း ဆားဘီးယားနယ်စပ်နဲ့ကပ်ရပ် ဘီယျဲလ်နာ ( Bijeljina ) မြို့လေးက ဘော့စ်နီးယန်းမွစ်ဆလင်မ်တွေပါ။
ဆားဘီးယားနိုင်ငံတွင်းကနေ ဗြောင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဆာဘ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ဘီယျဲလ်နာမြို့ကို ရုတ်ချည်းအလွယ်တကူဝင်ရောက်သိမ်းပိုက် လိုက်ပြီးမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ မွစ်ဆလင်မ်အရပ်သားတွေကို သတ်ဖြတ်ပါတော့တယ်။တစ်အိမ်တက်ဆင်း ရှာဖွေရင်းသတ်ဖြတ်နေတဲ့ ဆာဘ်တွေပေးချင်တဲ့ message က “ငါတို့ဟာ တကယ်ဆော်တဲ့ကောင်တွေ၊ မင်းတို့ဘော့စ်နီးယန်း တွေကအင်အားမဲ့နေတဲ့ကောင်တွေ” ဆိုတာမျိုးပါ။
ဘီယျဲလ်နာမြို့မှာ အရပ်သားတွေကို သတ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း အလီဂျာဆီရောက်လာတော့ သူဟာ အံ့အားတသင့်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါဟာ လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုး အမုန်းတရားတွေရှိလို့ဖြစ်ကုန်တာလို့ သွေးရိုးသားရိုး တွေးမိတဲ့အလီဂျာဟာ မြို့တော်ဆာရာယေဘိုမှာ ဆာဘ်နဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေ လက်ချင်းချိတ်ပြီး သွေးစည်းညီညွတ်မှုပြဖို့ အားထုတ်ပါတယ်။ ကာရာဒစ်ဇ်လို အစွန်းရောက်သမားမဟုတ်တဲ့ ဆာဘ်ခေါင်းဆောင် တချို့ကလည်း အလီဂျာရဲ့ ဆော်သြမှုကို လက်ခံပြီးလူမျိုးပေါင်းစုံ လက်တွဲဆန္ဒပြပွဲကို ပါဝင်ကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဆာဘ်၊ ဘော့စ်နီးယန်းမွစ်ဆလင်မ်လူအုပ်ဟာ လက်ချင်းချိတ်လို့ ချစ်ကြည်ရေးသီချင်းတွေ ကြွေးကြော်သံတွေ တိုင်တည်လို့ မြို့ကိုပတ်ပါတယ်။။ အဲ့ဒီလိုပတ်ရင်းနဲ့ လူအုပ်ဟာ ကာရာဒစ်ဇ်တို့ ပါတီရုံးအနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာ စနိုက်ပါနဲ့ အပစ်ခံရပါတော့တယ်။ လူအုပ်ကြီးဟာ သွေးသံရဲရဲနဲ့ ပြိုကွဲသွားပါတော့တယ်။
ရဲတပ်ဖွဲ့က စနိုက်ပါသမားရှိရာအဆောက်အအုံကို ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး ဖမ်းဆီးရာမှာတော့ ဆာဘ်လူမျိုးစနိုက်ပါသမားကို ဖမ်းဆီးမိပါတယ်။ ဘယ်သူကခိုင်းလဲဆိုတာတော့ပြောမရတော့ပါဘူး။ ကာရာစ်ဇ်အပါအဝင် ဆာဘ်အစွန်းရောက်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဆာရာယေဗိုမြို့ကနေ ထွက်ခွာသွားပြီး မြို့ကိုအထက်စီးကနေမြင်ရတဲ့ တောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာ နေရာယူလိုက်ကြပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ ဆာရာယေဗို မြို့တွင်းက မွစ်ဆလင်မ်ရပ်ကွက်တွေကို အမြောက်ဆံမိုးရွာချပါတယ်။
မွစ်ဆလင်မ်တွေက ကာရာဒစ်ဇ်အပါအဝင်အစွန်းရောက်ဆာဘ်တွေကိုဘယ်လိုမှ အယုံအကြည်မရှိတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ရပ်ကွက်မှာကိုယ် အတားအဆီးတွေချပြီး လက်နက်ကိုင်အစောင့်တွေနဲ့ ကင်းလှည့်ရင်းစောင့်ကြပ်နေရပါတော့တယ်။
တန်းတူညီမျှမှုကိုလက်ခံတဲ့ လက်တဆုပ်စာဆာဘ်တချို့ဟာလည်း ဘော့စ်နီးယားမွစ်ဆလင်မ်စစ်တပ်နဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့တာတော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါးတည်တံ့လာတဲ့ လူမျိုးပေါင်းစုံ သွေးစည်းညီညွတ်မှုဟာ ကာရာဒစ်ဇ်တို့ရဲ့ အမြောက်ဆန်တွေကြားမှာ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ အောက်ခြေက ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်ကြသော်လည်းပဲ လူမျိုးကြီးဝါဒီအစွန်းရောက်သမားတွေလက်ထဲမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့ လက်နက်ရောက်သွားရင်တော့ သွေးချောင်းစီးတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ ရှောင်လွှဲလို့ မရစကောင်းပေါ့ဗျာ။
တိုက်ပုံဝတ်ပြီး ညစာစားပွဲတွေတက်ရင်း စင်ပေါ်ကနေ ချစ်ကြည်ရေးတော်ကီတွေလွှတ်ရင်း ဂျင်နိုဆိုဒ်ကို တားဆီးလို့ရမယ်ထင်ရင်တော့ ဘော့စ်နီးယားမှာဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတာတွေကိုသာ ပြန်ကြည့်ပါလို့ ပြောပါ ရစေ။
မြို့ပြ ethnic cleansing
သွေးချောင်းစီးမယ့် စစ်ပွဲဟာ ရှောင်လို့မရတော့ပါဘူး။ စစ်ပွဲစစချင်း ၁၉၉၂ ဧပြီလအတွင်းမှာပဲ စစ်အင်အားကောင်းတဲ့ ဆာဘ်တွေဟာ နယ်မြေတွေကို တဟုန်ထိုးသိမ်းပိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံရဲ့ “မြောက်ပိုင်းတစ်ခြမ်းလုံး”ဟာ ဆာဘ်တွေလက်ထဲရောက်သွားပြီး ၁၉၉၁ ခရိုအေးရှားစစ်ပွဲကတည်းက ဆာဘ်တွေသိမ်းထားပြီးသား ခရိုအေးရှားအရှေ့ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ ဘော့စ်နီးယား “အနောက်ခြမ်း” ဟာလည်း ဆာဘ်တွေလက်ထဲ အသာလေးရောက်သွားပါတယ်။
ဆားဘီးယားနဲ့ နယ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ ဘော့စ်နီးယား “အရှေ့ခြမ်း တစ်ခုလုံးနီးပါး” ဟာလည်း ဆာဘ်တွေလက်ထဲခဏတွင်းရောက်သွားပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့၊ အနောက်နဲ့ မြောက်ပိုင်းအားလုံးကို သိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ ဘော့စ်နီးယန်းမွစ်ဆလင်မ်တွေဟာ တောင်ပိုင်းနဲ့ အလယ်ပိုင်းကွက်ကွက်လေးမှာ ကုပ်ကပ်နေရတဲ့ဘဝ ရောက်သွားပါတယ်။ ကျန်ရစ်တဲ့တောင်ပိုင်းဟာလည်း ခရိုအတ်လူမျိုးတွေနဲ့ရောထွေးယှက်တင်ဖြစ်နေတာမို့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေပိုင်တဲ့နယ်မြေဆိုလို့ ထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့ အလယ်ပိုင်းဒေသကွက်ကွက်လေးပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထွက်ပေါက်လမ်းမကြီးတွေအားလုံးဟာ ဆာဘ်တွေလက်ထဲရောက်သွားပြီး ဘော့စ်နီးယန်းတွေအဖို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရ ကမ္ဘာကြီးနဲ့ တိုက်ရိုက်အဆက်ပြတ်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။
၁၉၉၂ မကုန်ခင် တနှစ်အတွင်း ဆာဘ်တွေအနေနဲ့ ဘော့စ်နီးယား နိုင်ငံရဲ့ ၇၀% ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီလိုသိမ်းပိုက်ရာမှာ နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့ အနောက်ပိုင်းဟာသိပ်ပြဿနာမရှိလှပေမယ့် နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ခြမ်းမှာတော့ ဆာဘ်တွေ
အဲဒါကတော့ ဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ခြမ်းဟာ မွစ်ဆလင်မ်တွေ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်အခြေစိုက်နေလာတဲ့ ဒေသဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဆားဘီးယားနိုင်ငံနဲ့ နယ်ချင်းကပ်နေတဲ့ ဘော့စ်နီးယားအရှေ့ပိုင်းက မွတ်ဆလင်မ်နယ်မြေတွေဟာ ဆာဘ်တွေအဖို့တော့ ခေတ်အဆက်အဆက် မျက်စိစပါးမွေးစူးစရာဒေသ ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။
ခုတော့ ဆာဘ်တွေဟာ အဲ့ဒီဒေသက နှစ် ၅၀၀ လောက်အမြစ် တွယ်ခဲ့တဲ့ မွစ်ဆလင်မ်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အမြစ်ကဆွဲနှုတ်ခွင့်ရခဲ့ပါပြီ။
ဆာဘ်တွေဟာ ၁၉၉၂ ဧပြီလအတွင်း ဘော့စ်နီးယား အရှေ့ခြမ်းက Zvornik ၊ Visegrad နဲ့ Foca မြို့တွေကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမြို့တွေမှာ မွစ်ဆလင်မ်တွေနေထိုင်ကြပါတယ်။ Zvornik မြို့မှာ ဆာဘ်တွေဘာလုပ်ခဲ့သလဲ ကြည့်ရအောင်ပါ…။
ပထမဆုံးဆာဘ်တွေက မြို့ကို လက်နက်ချခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ လူတစ်ရာ တောင်မပြည့်တဲ့ ဘော့စ်နီးယားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ တင့်ကားတွေ အမြောက်တွေအပါအဝင် လူထောင်ချီတဲ့ ဆာဘ်တပ်နဲ့ အဝိုင်းခံလိုက်ရပြီး လက်နက်ချလိုက်ရပါတယ်။ လက်နက်ချပြီးပြီ။ မြို့ကိုလည်း ဆာဘ်တွေသိမ်းလိုက်ပြီ။ တိုက်တာခိုက်တာတွေလည်း မရှိတော့တာမို့ လူသေစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။ ဒါက ပုံမှန်စစ်ပွဲတစ်ရပ်ဆိုရင် မှန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဆာဘ်တွေဆင်နွှဲနေတာ စစ်ပွဲသပ်သပ်မဟုတ်ပါဘူး။ လူမျိုးရေးသန့်စင်ပွဲလို့ နာမည်တပ်ထားတဲ့ လူသတ်ပွဲပါ။ ဒီလူသတ်ပွဲဟာ စစ်ပွဲထုံးစံနဲ့မတူဘဲ လက်နက်ချပြီးမှစတင်ပါတယ်။ ဆာဘ်တွေဟာမြို့ကို မသိမ်းခင်ကတည်းက ဒီမြို့မှာ ဘော့စ်နီးယန်းနိုင်ငံရေးသမား ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်၊ ရှေ့နေက ဘယ်နှစ်ယောက်၊ ဆရာဝန်ကဘယ်နှစ်ယောက်၊ နာမည်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်၊ ဘယ်မှာနေတယ် အစရှိသဖြင့် ဒီမြို့က ဘော့စ်နီးယန်းပညာတတ်လူတန်းလွှာရဲ့ အနေအထားကို အသေးစိတ် ထောက်လှမ်းထားပြီးသားပါ။
မြို့ကိုလည်း သိမ်းပြီးရော ဆာဘ်လက်နက်ကိုင်တွေဟာ အဲဒီထောက်လှမ်းထားပြီးသားသူတွေရဲ့ အိမ်တွေကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာပြီးတော့ သတ်ပွဲတွေကျင်းပပါတယ်။ အိမ်ရှေ့မှာ ဆာဘ်တွေ သေနတ်တ ကားကားနဲ့ ရောက်လာလို့ ဘာများလဲလို့ထွက်ကြည့်မိတဲ့ မွစ်ဆလင်မ်ရှေ့နေဟာ သူ့အိမ်ရှေ့တံခါးဝမှာတင် အသက်ပျောက်သွားပါပြီ။ ဥယျာဉ်ထဲမှာ ပန်းပင်ရေလောင်းနေတဲ့ မွစ်ဆလင်မ်ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ သွေးတွေက ပန်းအိုးထဲမှာအိုင်ထွန်းပြီး ကျန်နေခဲ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုနည်းနဲ့ဆာဘ်တွေ မြို့တစ်မြို့မှာရှိတဲ့ ဦးဆောင်လူတန်းစား ပညာတတ်တွေကို သုတ်သင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကျန်ရစ်တဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကို ထင်သလိုပြုကျင့်ပါတော့တယ်။ အရွယ်ကောင်းတဲ့မိန်းခလေးတွေဟာ ဆာဘ်တွေရဲ့ မုဒိန်းသားကောင်တွေဖြစ်လာပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကတော့ ဆာဘ်အကျဉ်းထောင်မှာ အကျဉ်းသားတွေဘဝကိုကျရောက်သွားပါတယ်။
ကျန်ရစ်တဲ့ အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေကတော့ ရှိသမျှ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုထားရစ်ခဲ့လို့ ခြေဦးတည့်ရာ ထွက်ခွာရပါတော့တယ်။
ဒါဟာ ဆာဘ်တွေမြို့တစ်မြို့ကို သိမ်းပိုက်ပြီးရင် လုပ်နေကျပုံစံပါပဲ။ ဒါကိုမြို့ပြမှာလုပ်တဲ့ ethnic cleansing လို့ပဲပြောရဦးမှာပါ။ ကျေးလက်မှာ ဆာဘ်တွေ ဘာလုပ်သလဲဆိုတာ ဆက်ဖတ်ကြပါဦး။
၆၂ အာဏာသိမ်းပွဲအပြီး ဗမာစစ်တပ်က ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေ ပညာတတ်တွေကို ဖျောင်ပစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ကို သတိရစရာပါ။ အာဏာသိမ်းပွဲအပြီးဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်း ဖမ်းဆီးခံရပေမယ့် ရှမ်းတွေလို အလောင်းတောင်ပြန်မရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတော့ သိပ်မရှိခဲ့ပါဘူး။
ဖက်ဒရယ်ကိစ္စမှာ ထိပ်ကဦးဆောင်တဲ့ ရှမ်းပညာတတ်တွေဟာ တောခိုရင်ခို၊ မခိုရင် နေဝင်းဆီဒူးထောက်ခစား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ အလောင်းတောင် ပြန်မရဘဲ အဖျောင်ခံလိုက်ရပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရဲ့ ပညာတတ်လူတန်းစားအလွှာကို သီးသန့်ပစ်မှတ်ထားချေမှုန်းခြင်းဟာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရဲ့လက္ခဏာဆိုတာကို သတိမူမိစေချင်တာပါ။
ဗမာက ပိုလက်သံပြောင်တာက လူနည်းစုမျိုးနွယ်ထဲကနေ ပညာတတ် လူတန်းစားပေါ်ထွက်မလာအောင်ပါ ဆက်လုပ်ပစ်နိုင်ခဲ့တာပါ။
ဥပမာ – ဗမာအများစုနေထိုင်ရာ ရန်ကုန်မှာ ဆေးတက္ကသိုလ်-၁၊ ဆေးတက္ကသိုလ်-၂၊ စစ်ဆေးတက္ကသိုလ်ဆိုပြီး ၃ ခုရှိသလို ဗမာအနေများတဲ့ မကွေးနဲ့ မန္တလေးလိုနေရာမှာပါ ဆေးတက္ကသိုလ်တွေရှိပေမယ့် ကချင်၊ ချင်း၊ ကရင်၊ ရခိုင်၊ မွန် ဘယ်ဒေသမှာမှ ဆေးတက္ကသိုလ် မရှိပါဘူး။ (ရှမ်းပြည်မှာတောင် လွတ်လပ်ရေးပီး နှစ် ၆၀ ကျော်ကြာမှ ဆေးတက္ကသိုလ်တစ်ခု မြေစမ်းခရမ်းပျိုးတုန်းရှိပါသေးတယ်။) ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်။
ဒါတွေဟာ မတော်တဆဖြစ်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ နှစ် ၆၀ ကျော်အတွင်းသေချာ အကွက်ချစီစဉ်ပြီး လူနည်းစုတွေအနေနဲ့ ဗမာကို အစဉ်သဖြင့်ဦးညွတ်နေရအောင် လုပ်ထားတာပါ။ ဗမာတွေဟာ ဂျင်နိုဆိုဒ်လုပ်ရာမှာ အထူးကျွမ်းကျင် အဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ။ တော်ရုံတန်ရုံ စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးပညာနဲ့တော့ ဗမာကိုလှန် လို့မရပါဘူး။ ဗမာကိုတော်လှန်ဖို့ ကမ္ဘာ့ထိပ်သီးနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ ပညာ၊ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားကို လိုကိုလိုအပ်နေပါပြီ။
ကျေးလက် ethnic cleansing
မြို့ပြတွေကနေ အဝတ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ ထွက်ပြေးလာရတဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေဟာ ကျေးလက်ဒေသတွေကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျေးရွာကသူတို့သားချင်းတွေကို ဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းပြောပြကြပါတယ်။ ကျေးရွာက အမျိုးတွေကတော့ သူတို့ပြောတာကို မယုံပါဘူး။ သူတို့သိတဲ့ဆာဘ်ဆိုတာ ဟိုးအရင်ကတည်းက ရွာမှာအတူနေလာကြတဲ့ နွားကျောင်းဖက်၊ လယ်လုပ်ဖက် သူတို့ဘော်ဒါဆာဘ်တွေကိုပါ ။ ဘယ်နှဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ခင်လိုက်ကြတာမှအပြန်အလှန် လက်ထပ်ကြတာတွေတောင်ရှိသေး။ မင်းတို့မြို့မှာကြုံရတာတွေက စစ်ဖြစ်နေလို့ပါကွာ။ ဒီမှာတော့အေးဆေးသာနေ ဘာမှမဖြစ်ဘူး စိတ်ချ။
အဲ့လို စိတ်ချလက်ချ စိတ်အေးသက်သာစွာနေတဲ့ ကျေးရွာလေးကိုဆာဘ်တပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာပြီး အိမ်တံခါးတွေကို ဆောင့်ကန်ဖွင့်လိုက်ချိန်မှာတော့ဘော့စ်နီးယန်းတွေဟာ အိပ်မှုံစုံမွားအိပ်ကောင်းချိန် ဒါမှမဟုတ် မနက်ခင်းနွားနို့ ပူပူလေးဇိမ်ခံသောက်လျက် ရှိနေတာမျိုးပါ။
ဆာဘ်တွေကို ပြန်ခုခံဖို့နေနေသာသာ သူတို့ဆီရောက်လာသူတွေဟာ သေမင်းတမန်တွေမှန်းကို ဘော့စ်နီးယန်းတွေဟာ မသိကြပါဘူး။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ တောင်းပန်သံတွေဆူညံနေတဲ့ အိမ်လေးမှာ ဒိုင်းခနဲ ဒိုင်းခနဲ သေနတ်သံ တွေထွက်သွားပြီး နံရံတွေမှာသွေးစွန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ မျိုးရိုးစဉ်ဆက် အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်စွာနေထိုင်လာတဲ့ ဘော့စ်နီးယန်း မိသားစုတစ်စုဟာ ပျက်သုဉ်းသွားခဲ့ပါပြီ။ အဲ့လို မိသားစုတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည် ဆောက်ထားတဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းကျေးရွာလေးဟာလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ အဲ့ဒီ ကျေးရွာအစား ဆာဘ်အလံတလူလူလွင့်နေတဲ့ ကျေးရွာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပါပြီ။
ဘော့စ်နီးယန်းတွေဟာ သတိမမူလို့သာ ဂူမမြင်ဖြစ်နေကြတာပါ။ တကယ်တော့ဆာဘ်တွေဟာ ဒီအလုပ်တွေကို တအားကြီးလျှို့ဝှက်ပြီးလုပ် နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ – ဆဲလင်ညက်မြို့နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေမှာ ဆာဘ်တွေဟာ မြို့ကိုသိမ်းပြီးနောက် ဒေသန္တရဥပဒေတစ်ရပ်ကိုထုတ်ဆင့်လိုက်ပါတယ်။
ဥပဒေကတော့ . .
၁။ လဘက်ရည်ဆိုင် စားသောက်ဆိုင်လို အများပြည်သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကို လာရောက်ခွင့်မရှိ။
၂။ ဂျိုဆဗ်ကာမြစ်အတွင်းမှာ ရေမချိုးရ။
၄။ တစ်မြို့မှ တစ်မြို့ ခရီးမသွားရ။
၁၀။ အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူခွင့် ရောင်းချခွင့်မရှိ။
ဆာဘ်တွေဟာ ပုံစံကွဲပေမယ့်အတွင်းသဘောတူတဲ့ ဒါမျိုးအမိန့်တွေကို ဒေသခံအာဏာပိုင်အဆင့်တွေကနေ ဒေသတိုင်းနီးပါးမှာထုတ်ဆင့်ခဲ့ပါတယ်။ အူကြောင်ကြောင်အမိန့်တွေလို့ထင်ရပေမယ့် ဒါတွေဟာ တကယ်တော့ အဲ့ဒီဒေသက ဘော့စ်နီးယန်းတွေကို isolated ဖြစ်အောင်၊ ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ အဆက်ပြတ်အောင်သေချာလုပ်လိုက်တာပါ။ ပြီးရင်တော့ လူသတ်ပွဲကျင်းပပါလိမ့်မယ်။
(ဗဟိုက ဆာဘ်ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်ပိုင်းက ဒါမျိုးအမိန့်တွေကို ဘယ်တော့မှ မထုတ်ဆင့်ပါဘူး။ ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်တွေကပဲ ဒါမျိုးအမိန့်တွေကို ထုတ်ဆင့်လေ့ရှိပါတယ်။ ဗဟိုကဆာဘ်တွေဟာ ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ မပတ်သတ် သယောင်နေပြလေ့ရှိပါတယ်။)
ဆာဘ်တွေဟာ ကျေးရွာလူသတ်ပွဲတွေကိုလည်း စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ သတ်တဲ့အဖွဲ့၊ အလောင်းဖျောက်တဲ့အဖွဲ့၊ လိုအပ်ရင်မီးရှို့တဲ့အဖွဲ့၊ ပြီးရင် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ရွာမှာ ဆာဘ်တွေအခြေကျအောင်လုပ်တဲ့အဖွဲ့ စသဖြင့် စနစ်တကျ လုပ်တာပါ။
ဆာဘ်တွေအနေနဲ့ သူတို့ဒီလိုလုပ်ချင်ရာလုပ်နေတာကို ဘယ်သူမှမသိဘူး ဘယ်သူကမှစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ ယူဆထားကြပါတယ်။ သူတို့ယူဆချက် ကလည်း မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရာနှုန်းပြည့်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆာဘ်တွေလုပ်တာကို တိတိပပ သိနေတဲ့ အဖွဲ့တချို့ရှိပါတယ်။ သူတို့ကတော့ CIA အပါအဝင် အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေပါ။ ဒါပေမဲ့ CIA ထဲက လူတွေဟာ သိပေမယ့်လည်း စိတ်မဝင်စား အရေးယူဖို့လည်း အာရုံမရှိလှကြပါဘူး။
အဲ့သလို မလုပ်၊ မရှုပ်၊ မပြုတ်နေချင်သူတွေထောင်ချီတဲ့ထဲကမှ ဆာဘ်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို တစ်စုံတစ်ရာ action ယူချင်တဲ့ CIA အရာရှိ လက်တစ်ဆုပ်စာတော့ ရှိနေပါသေးတယ်။
လက်တစ်ဆုပ်စာလို့ပြောတာကမှ များနေပါသေးတယ်။ အဲလို အမြင်မတော်ရင်မနေတတ်တဲ့သူက ၅ ယောက်လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ဒီ ၅ ယောက်လောက်ဟာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားထည့်မတွက်ဘဲ ဒီရေကိုဆန်တက်တဲ့ တကယ့်ယောက်ျားကောင်းတွေပေါ့ဗျာ။
စကားမစပ်ပြောရရင် ဆာဘ်ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေ ထုတ်ဆင့်တဲ့ ဥပဒေကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ပါလား။ မြန်မာပြည်က ရပ်ကွပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ မြို့နယ်ထွေအုပ်တို့က အခါအားလျော်စွာထုတ်တဲ့ ခရစ်ယာန်တွေ၊ မွစ်ဆလင်မ်တွေစုပေါင်းဝတ်မပြုရ၊ ဘာသာရေးစာမသင်ရ၊ မြေဝယ်ခွင့်မရှိ၊ မွစ်ဆလင်မ်ကိုအဝေးပြေးကားလက်မှတ် မရောင်းရအစရှိတဲ့အမိန့်တွေနဲ့ တူမနေဘူးလား။
ဒါဟာ ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်က လုပ်သလိုလိုနဲ့ တကယ်တော့ ဗဟိုကနေစနစ်တကျကို ခိုင်းနေတာဗျို့။ နိုင်ငံတကာဖိအားပေးမှုတွေသာမရှိရင် မြန်မာတစ်ပြည်လုံးမှာ အဲဒီလိုအမိန့်တွေ ပလူပျံနေပြီပေါ့ဗျာ။ သင်ဟာ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်နေရကြောင်း အစဉ်အမြဲ သတိရှိပါ။
ဟ ! ဒါဘာတွေလဲ ?
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ထောက်လှမ်းရေးဗျူရိုက အရာရှိ ဂျွန်ဝက်စ်တန်ဟာ သူ့အလုပ်ကို အင်မတန်မှ ဂုဏ်ယူတဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့အလုပ်ကတော့ စစ်ထောက်လှမ်းရေးဂြိုဟ်တုက ရိုက်ပေးတဲ့ဓါတ်ပုံတွေ၊ ကြားဖြတ်ကြေးနန်းတွေ၊ ကြားဖြတ်ဖုန်းလိုင်းတွေကသတင်းတွေ၊ သူလျှိုဆီကရတဲ့သတင်းတွေ၊ ဒုက္ခသည်တွေဆီကရတဲ့သတင်းတွေစတဲ့ အချက် အလက်ပေါင်း ၁၀၀၀ ထောင်ကျော်ကို နေ့စဉ် စီစစ်ပီး အစီရင်ခံစာရေးတင်ရတဲ့ အလုပ်ပါ။
ဒီလိုနေ့စဉ်အစီရင်ခံစာတွေကို ဖတ်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအကြံပေးတွေနဲ့ အရာရှိကြီးတွေဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဝက်စ်တန်အနေနဲ့ ဘော့စ်နီးယားသတင်းတွေကို စီစစ်ဖို့တာဝန်ပေးခံရတာပါ။ သူအဓိက စီစစ်ရမယ့်တာဝန်ကတော့ ဆာဘ်စစ်ဘက်အခြေစိုက်စခန်းတွေ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးနဲ့ တပ်တည်တပ်လှုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မကြည့်သော်လည်း မြင်နေရတာတွေကတော့ ဆာဘ်တွေရဲ့ လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တွေပါပဲ။ အစကတော့ ဝက်စ်တန်အနေနဲ့ ရွာတွေမီးလောင်တယ်ဆိုတာ စစ်အတွင်းမတော်တဆဖြစ်တာလို့ ယူဆမိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ခဏခဏဖြစ်ပါများပြီး မြင်ပါများတော့ ဒီကိစ္စမှာတစ်ခုခုတော့ မဟုတ်တာတွေဖြစ်နေပြီလို့ သူတွက်ဆမိလာပါတယ်။ ရက်အနည်းငယ်လောက် သတိထားစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ သူသေချာသိသွားပါပြီ။ ဒါတွေဟာ မတော်တဆလုံးဝမဟုတ်တဲ့ ကြိုတင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ကျူးလွန်နေတဲ့ ရာဇဝတ်မှုကြီးဆိုတာကိုပါ။
ဝက်စ်တန်အနေနဲ့ နောက်ရက်ဆိုရင် ဘယ်နားကဘောစ်နီးယန်းရွာမှာ မီးရှို့သတ်ဖြတ်တာတွေဆက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာပါ ခန့်မှန်းနိုင်လာပါတယ်။ ဘာမှမသိတဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းနေနေတဲ့ ဘောစ်နီးယန်းရွာလေးဟာ ဝက်စ်တန်ခန့်မှန်းမိတဲ့အတိုင်း နောက်ရက်ကျ ငရဲမီးထဲမြိုက်ခံလိုက်ရပါပီ။ မနေ့က ရွာထဲမှာလှုပ်ရှားသွားလာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သူတွေဟာ ဒီနေ့မှာ ရွာအပြင်ကွင်းပြင်က ကျင်းထဲမှာဘဝဆုံးနေပါလိမ့်မယ်။
ဝက်စ်တန်အနေနဲ့ ဒါတွေကိုသိနေရက်နဲ့ သွေးအေးအေးနဲ့ ထိုင်ကြည့်နေရတဲ့သူ့အဖြစ်ကို စိတ်မလုံတော့ပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် ရွာသားတွေကို သွားပြောပြချင်ပါတယ်။ “ဟေ့…မင်းတို့ကို နောက်နေ့ကျ လာသတ်တော့မှာ” လို့ အော်ပြော လိုက်ချင်ပါတယ်။
သမုဒ္ဒရာခြားတဲ့ US မြေပေါ်ကနေ ဘော့စ်နီးယန်းတွေဆီ တိုက်ရိုက် လှမ်းမပြောနိုင်ပေမယ့် ဝက်စ်တန်အနေနဲ့ သွယ်ဝိုက်ပြောလို့ရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက သူ့အထက်အရာရှိတွေကိုပါ။ ဝက်စ်တန်အနေနဲ့သူရဲ့အစီရင်ခံစာမှာ ဒီအချက်အလက်တွေကိုထည့်သွင်းရေးသားပီး US အစိုးရအဖွဲ့သိအောင် အားထုတ်တာပါ။ ဒါတွေကိုသိရင် US အစိုးရအဖွဲ့က တစ်စုံတစ်ရာ action ယူလာလိမ့်မယ်လို့ သူယူဆထားပါတယ်။
ဝက်စ်တန်နဲ့ CIA က သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်ဟာ ဒီလိုအစီရင်ခံစာတွေကို တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ရေးတင်ကြသူတွေပါ။ သူတို့မျှော်လင့်ထားတာက ဒုက္ခရောက်နေသူတွေအတွက် တရားမျှတမှုပါ။ သူတို့ပြန်ရတာကတော့ အထက်က အရာရှိတွေရဲ့ မျက်မှောင်ကုပ်ကြည့်ခံရတာပါ။ US အစိုးရအဖွဲ့ဟာ ဘော့စ်နီးယားကိစ္စကို သမုဒ္ဒရာခြားတဲ့ ဥရောပတိုက်က ပြည်တွင်းစစ်တခုလို့သာ ယူဆထားတာပါ။
ဆိုဗီယက်လည်း ပြိုကွဲသွားပြီ၊ ဥရောပအနေနဲ့ ကိုယ်ပြသနာကိုယ်ရှင်းကြတော့၊ နေရာတကာ အမေရိကန်ချည်းပဲ တမနေကြနဲ့လို့ US အစိုးရက အပြတ်ပြောပြီးသားပါ။ အစိုးရအဖွဲ့က ဒီလိုမူဝါဒရှိချိန်မှာ အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ ဝက်စ်တန်တို့ ၄ ယောက်က တစ်စခန်းထပြီး စစ်ဘက်နဲ့မဆိုင်တဲ့ အစီရင်ခံစာတွေ လာတင် နေတော့ အထက်ကငြိုငြင်တာကိုခံရတာပေါ့ဗျာ။ ဝက်စ်တန်ကတော့ ငြိုငြင်တာတွေကို ခဏမေ့ထားပြီး သူ့ခံယူချက်အတိုင်း ကြည့်စရာရှိတာတွေကိုကြည့်ရင်း အစီရင်ခံတာတွေကိုထပ်လုပ်ပါတယ်။
ဒီမှာတင် သူနောက်ထပ်သတိထားမိလာတာက… ဘောစ်နီးယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဘရက်ခ်ကိုမြို့က သားသတ်ရုံတစ်ခုပါ။ (မြန်မာပြည်က သားသတ်ရုံလောက်ကိုမျက်လုံးထဲမမြင်ပါနဲ့၊ ဟိုမှာက စက်ယန္တယားတွေနဲ့ တရက်ကိုအကောင်ရေထောင်ချီသတ်လို့ရတဲ့ သားသတ်ရုံမျိုးပါ။)
အဲဒီသားသတ်ရုံက စစ်ပွဲအစပိုင်းမှာ လည်ပတ်မှု ခေတ္တရပ်ဆိုင်းသွားပါတယ်။ အခု လအတန်ကြာတော့ ပြန်လည်ပတ်လာပါပြီ။ နေ့စဉ်လည်း ထရပ်ကားတွေနဲ့ သားကောင်တွေလာပို့နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီသားကောင်တွေဟာ ကျွဲတွေ၊ နွားတွေမဟုတ်ဘဲ လူတွေဖြစ်နေတာပါ။ တိတိကျကျပြောရရင်တော့ ဘောစ်နီးယန်းမွစ်ဆလင်မ်သားကောင်တွေပါ။
ထရပ်ကားတွေဝင်လာလိုက်၊ လူတွေကို ချသွားလိုက်၊ သားသတ်ရုံက စက်တွေလည်ပတ်လိုက်၊ သားသတ်ရုံဘေးပတ်လည်ကွက်လပ်က ကျင်းတွေမှာ လူရိုးတွေကိုမြုပ်လိုက်နဲ့ ဆာဘ်တွေရဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ယန္တယားလည်ပတ်ပုံကို ဂြိုဟ်တုဓါတ်ပုံမှာထင်းထင်းကြီး မြင်နေရပါတော့တယ်။ ဒါဟာ နာဇီစတိုင် သေမင်းတမန်အကျဉ်းစခန်းပဲပေါ့။ ဆာဘ်တွေမှာ ဒီလိုအကျဉ်းစခန်း ဘယ်နှစ်ခုလောက်များ ရှိနေသလဲဆိုတာကို ထောက်လှမ်းကြည့်တော့ စုစုပေါင်း အခု ၂၀၀လောက်ရှိနေပါရောလား။
အကျဉ်းစခန်းတိုင်းမှာတော့ ပုံမှန်လူသတ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တချို့စခန်းတွေက မိန်းခလေးတွေကိုဖမ်းပြီး မုဒိန်းကျင့်ဖို့၊ တချို့စခန်းတွေက အတင်းအဓမ္မအင်အားသုံးခိုင်းစေဖို့ စသဖြင့် အမျိုးမျိုးအစုံစုံပါ။ မြေပြင်က ဒုက္ခသည်
တွေရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့ ဝက်စ်တန်ရဲ့ဂြိုဟ်တု ဓါတ်ပုံတွေနဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။ ဝက်စ်တန်နဲ့ သူ့ဘော်ဒါ ၃ ယောက်ဟာ ထောက်လှမ်းရေးကြားဖြတ် ကြေးနန်းတွေနဲ့ ဂြိုဟ်တု ဓါတ်ပုံတပုံတခေါင်းကြီးကို ၃ ရက်နဲ့ ၃ ညဆက်တိုက် မနေမနား အပင်ပန်းခံစီစစ်ခဲ့ပြီး နာဇီစတိုင်အကျဉ်းစခန်းတွေအကြောင်း အစီရင်ခံစာရေးတင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ထုံးစံအတိုင်း ဘာမှထူးမလာသေးပါဘူး။ ဝက်စ်တန်အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူရတဲ့ သူ့အလုပ်ပေါ်မှာ စိတ်ပျက်စ ပြုလာပါတယ်။ ဝက်စ်တန်က စိတ်ပျက်ရုံပဲပျက်တာပါ။ US နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဘော့စ်နီယားတာဝန်ခံ ဂျော့ခ်ျကန်နီဆိုရင် “ဘာမှလုပ်မရမဲ့အတူတူ ဒီအလုပ်က ထွက်တယ်ဟေ့” လို့ လူသိရှင်ကြားကြေငြာပြီး ဆန္ဒပြအလုပ်ထွက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
US နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ တာဝန်ခံတယောက်အဖြစ်အလုပ်ရဖို့ဆိုတာ အင်မတန်မှ ထက်မှ၊ ပညာတတ်မှ၊ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိမှ လူတစ်ထောင်မှာတယောက်ရတဲ့ အလုပ်မျိုးပါ။ မလုပ်မရှုပ် မပြုတ်နေချင်ပုံမရတဲ့ သူကတော့ အလုပ်ထွက်ပြီးကို ဆန္ဒပြသွားတာပါ။
ဒီအချိန်မှာ ဝက်စ်တန်ရဲ့ အထက်ကဆရာသမားတွေကို ဒီမတရားမှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဖင်မီးတိုက်မဲ့သူတွေပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေ သတင်းထောက်တွေနဲ့ အယ်ဒီတာကြီးတွေပါပဲ။
မိတ်ဆွေ သင်ဟာ သာမန်လူတယောက် မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်လက်ထဲက စမတ်ဖုန်းကိုပြန်ကြည့်ပါ။ အဲဒီဖုန်းဟာ ဟယ်ရီပေါ်တာထဲက မှော်ကြိမ်လုံးထက် ပိုအစွမ်းထက်ပါတယ်။ အဲဒီဖုန်းထဲမှာ အသံကို record လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဓါတ်ပုံဗီဒီယို ရိုက်လို့ရပါတယ်။ ရှိပြီးသားဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုတွေကို ကမ္ဘာသိအောင်ဖြန့်ပေးတဲ့ ဖေ့စ်ဘွခ်၊ ယူကျူ့ ၊ ဗိုင်ဗာ၊ တွိတာ ပါပါတယ်။
CIA အရာရှိ ဂျွန်ဝက်စ်တန်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၃၀ က လျှို့ဝှက်အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းရာမှာသုံးတဲ့ ဂြိုဟ်တုဓါတ်ပုံလို ဓါတ်ပုံမျိုးကို အချိန်မရွေးဖွင့်ကြည့်လို့ရတဲ့ application သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းမှာ အခုကို ရှိပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် ကမ္ဘာမြေပြင်က ဘယ်နေရာမီးလောင်ပြင်ဖြစ်သွားလဲ၊ ရေကြီးလဲ သင်ကိုယ်တိုင် ဂြိုဟ်တုဓါတ်ပုံမှာ ထောက်ကြည့်လို့ရပါပြီ။ သင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံးထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ တစ်ပတ်နွမ်းအသုံးအဆောင်တွေကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုခွင့်ရနေသူပါ။
သင်ဟာ ဒီ အသုံးအဆောင်တွေကို ဖွန်ကြောင်ဖို့၊ ကြူဖို့လောက်ပဲ မသုံးဘဲ အကျိုးရှိရှိသုံးတတ်မယ်ဆိုရင် ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုကိုတိုက်ဖျက်ရာမှာ နိုင်သလောက် ပါဝင်တိုက်ခိုက်တဲ့ စစ်သည်တယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Fighters against Genocide တွေနဲ့ ခုပဲလက်တွဲလိုက်ပါ ရဲဘော်…
နာဇီဟစ်တလာကို ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးချုပ် ချိန်ဘာလိန်က မြူးနစ်မြို့မှာ အလျှော့ပေးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက US အစိုးရဟာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ထပ် ၁၀ နှစ်တောင်မစောင့်လိုက်ရဘဲ အမေရိကန်တွေဟာ နာဇီ ဂျာမန်တွေနဲ့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မြေပြင်မှာရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်။ စစ်ကြီးလည်းပြီးရော နာဇီတွေလက်ချက်နဲ့ ဂျူး ၆ သန်းအပါအဝင် လူ ၁၁ သန်းကျော် အသက်ပျောက်ခဲ့ရတဲ့ ရာဇဝတ်မှုကြီးကို မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ နာဇီတွေရဲ့ အဲဒီဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုကြီးကို ဟိုလိုကော့စ်လို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ခုလည်း ဥရောပတိုက် ဘော့စ်နီးယားမှာ “ဟိုလိုကော့စ်ရဲ့ ပဲ့တင်သံaတွ”ကိုကြားနေရပြီ။ အမေရိကန်တွေ တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ ထပ်ပြီးခံယူကြဦးမှာလား။ ဒီလိုသဘောစတင်ရေးသားလိုက်တဲ့မီဒီယာတွေကတော့ ဂါးဒီးယန်း (The Guardian) နဲ့ အင်ဒီပင်းန်ဒန့်စ် (The Independence) သတင်းစာတွေပါ။ နေ့စဉ် ရုပ်သံလွှင်မှုတွေမှာလည်း နာဇီတွေရဲ့ ဟိုလိုကော့စ်နဲ့ ဘော့စ်နီးယားကအကျဉ်းစခန်းတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး လွှင့်ပေးပါတော့တယ်။ ၁၉၉၂ သြဂုတ်လ ပထမ ၂ ပတ်အတွင်း ဘော့စ်နီးယားအကြောင်း ရုပ်သံလွှင့်မှုပေါင်း ၄၈ ခုအထိရှိခဲ့ပါတယ်။
နယူးစ်ဒေး (The Newsday) သတင်းစာရဲ့ “အော့ခ်ျဝစ်ဇ်နဲ့အလားတူ” ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးဟာ စာပေပူလစ်ဇာဆုတောင်ရသွားပါသေးတယ်။ ပူလစ်ဇာဆုရတာထက် ပိုအဖိုးတန်တာကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက သာမန်ပြည်သူ တွေ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကိုပါရရှိခဲ့ပြီး အမေရိကန်အစိုးရကိုပါ ဖင်မီးတိုက်နိုင်လိုက်တာပါ။
ဝက်စ်တန်တို့ရဲ့ အစီရင်ခံစာတွေကို လျစ်လျူရှုခဲ့တဲ့ အိမ်ဖြူတော်ကအရာရှိကြီးတွေဟာ သတင်းစာရှင်းလင်းဆောင်မှာတော့ သတင်းထောက်တွေရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းမေးခွန်းတွေကို ရှောင်ထွက်လို့မရတော့ပါဘူး။ သတင်းထောက်တွေအနေနဲ့ကလည်း ဘော့စ်နီးယားကို သက်စွန့်ဆံဖျား သတင်းသွားယူခဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ကို အိယောင်ဝါးသွားဖြေလို့မရပါဘူး။ မီဒီယာတွေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်…
– ၁၉၉၂ ဇွန်လမှာ ဘော့စ်နီးယားဒုက္ခသည်ပထမအသုတ်ဟာ ခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်ကျော်ပြီးခရိုအေးရှားနိုင်ငံထဲကို ဝင်ရောက်လာချိန်မှာ သတင်းထောက်တွေဟာအမိအရ အင်တာဗျူးတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမှာတင် အကျဉ်းစခန်းတွေရှိကြောင်း အခိုင်အမာ လူသက်သေတွေ စရလာပါတယ်။
– ၁၉၉၂ ဇူလိုင်မှာ မန်ဂျာကာအကျဉ်းစခန်းကို ICRC က ဝင်စစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ပိန်ချုံးနေတဲ့ အကျဉ်းသားတွေဟာ သောက်စရာရေတောင်မရှိလို့ ခြောက်ကပ်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို စိုစွတ်အောင် ကိုယ့်သေးနဲ့ကိုယ်ပြန်စွတ်နေရတာမျိုးကို မှတ်တမ်းတင် နင်ခဲ့ပါတယ်။
ICRC ဟာ ဒီလိုအကျဉ်းစခန်း ၉ ခုထိကိုသွားရောက်လေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တခါတရံ သဲထိတ်ရင်ဖို ရင်ဆိုင်တာတွေလည်းကြုံရပါသေးတယ်။ ဥပမာ- ဆာဘ်ခေါင်းဆောင် ကာရာဒစ်ဇ်က “ဘာနာဇီ အကျဉ်းစခန်းမှမရှိဘူး။ ရိုးရိုး
စစ်အကျဉ်းစခန်းပဲ။ စစ်သုံ့ပန်းတွေကိုဖမ်းချုပ်ထားတာ၊ မယုံရင်ဝင်စစ်လို့” စိန်ခေါ်ပါတယ်။
ကာရာဒစ်ဇ် တွက်ထားတာက အထောက်အထားတွေကို ဖျောက်ဖျက်ပြီးမှ ဝင်အစစ်ခံဖို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ သတင်းထောက်တွေက ခြေသွက်လက်သွက်နဲ့ သတင်းအမြန်ဝင်ယူတဲ့အခါ ဖုံးတဝက်ပေါ်တဝက်တွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ ဒီအတွက် သတင်းထောက်တွေရတဲ့ဆုကတော့ ချောင်းပစ်ခံရခြင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သတင်းထောက်တွေဟာ နောက်တွန့်မသွားပါဘူး။ ထူးခြားတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ဥပမာ-ထရာနိုပိုဂျေ အကျဉ်းစခန်းကို သတင်းသမားတွေရောက်ခါမှ အကျဉ်းသားအသစ်တွေကို ဖမ်းခေါ်လာတာနဲ့ တိုက်ဆိုင်သွားတာမျိုးပါ။ အကျဉ်းသားတွေ အကျဉ်းစခန်းထဲဝင်ရောက်လာရပုံဟာ အောခ်ျဝစ်ဇ်ကို အဖမ်းခံဂျူးတွေ ဝင်ရောက်လာပုံနဲ့တူလွန်းလှပါတယ်။ သတင်းထောက်တွေကလည်း အမိအရ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အင်မတန်မှ ကြေကွဲစရာတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ ဥပမာ-အမေကိုသံဆူးကြိုးရဲ့ အခြားတဖက်မှာ ချုပ်နှောင်ထားပြီး သံဆူးကြိုးရဲ့ တဖက်မှာတော့ သမီးကို မုဒိန်းကျင့်ကြတာပါ။
ဆာဘ်တွေရဲ့ မုဒိန်းဒဏ်ကိုခံလိုက်ရတဲ့ ခလေးမလေးဟာ သွေးအိုင်ထဲမှာလဲနေပြီး ကူရာမဲ့ကယ်ရာမဲ့ တအိအိနဲ့ ဝေဒနာခံစားရရင်း အသက်ထွက်သွားတာကို သံဆူးကြိုးရဲ့အခြားတဖက်ကအမေခမျာ ဘာမှမကူနိုင်ဘဲ မျက်ရည်ကျပြီး ကြည့်နေရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေကိုလဲ အင်တာဗျူးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သတင်းထောက်တွေလိုပဲ အသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပီးဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံတွင်းကို ဝင်ရောက်ပြီးအထောက်အထားယူခဲ့သူတွေရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီလူတွေကတော့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဥပဒေပညာရှင်တွေပါ။ ဒီဥပဒေပညာရှင်တွေကို ဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံတွင်းကို စေလွှတ်ခဲ့တာကတော့ ဟဲလ်ဆင်ကီ အဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ (ဟဲလ်ဆင်ကီ အဖွဲ့ကြီးဟာ အခုချိန်မှာ HRW လို့အမည်တွင်လာခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ကြီးပါ။)
ဒီဥပဒေပညာရှင်တွေဟာ မကြာခဏ ဆာဘ်တွေရဲ့ချောင်းပစ်တာကို ခံရလေ့ရှိပါတယ်။ သေတဲ့သူတွေလည်းသေကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တာဝန်ကို ဦးထိပ်ထားလို့ အလုပ်ပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ်မကုန်ခင်မှာ ဟဲလ်ဆင်ကီရဲ့ အစီရင်ခံစာ ၂ စောင်ထွက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာ ၂ စောင်ဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ဆာဘ်တွေကို ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးရာမှာ အဓိကသက်သေတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ မီဒီယာတွေရဲ့တွန်းအားကြောင့် စီနီယာဘုရှ်ဦးဆောင်တဲ့ US အစိုးရဟာ ဘော့စ်နီးယားကိစ္စကို ဥရောပရဲ့ကိစ္စ သပ်သပ်လို့ မျက်နှာလွှဲခဲပစ် လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။
ထရမ့်က ဘာမှမလုပ်သေးဘူးလား။ US အစိုးရက ငုပ်တုပ်ထိုင်ကြည့်နေ တာလားဆိုတာရဲ့ အဖြေပါ။ ထရမ့်ဖြစ်ဖြစ် ဘုရ်ှဖြစ်ဖြစ် သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်က ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရေးနဲ့ အာဏာတည်မြဲရေးပါ။ ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိစ္စဟာ သူတို့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကို ဖင်မီးတိုက်ပေးပီး ဂျင်နိုဆိုဒ်ကိစ္စမှာ အလုပ်လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ အဲဒီလို အလုပ်လုပ် ခိုင်းတတ်ခြင်းဟာ နိုင်ငံရေးပညာပါပဲ။ ဘော့စ်နီးယားကိစ္စမှာ CIA ရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုတောင် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားမရှိတော့ အိမ်ဖြူတော်က လျစ်လျူရှုပါတယ်။ မီဒီယာတွေနဲ့ တည်ပေးလိုက်မှပဲ ဘုရ်ှဟာ အလုပ်လုပ်တော့တာပါ။
ဒီနေရာမှာ လျှိုကွက်တွေ ကျန်ပါသေးတယ်။ သတင်းထောက်တွေနဲ့ ICRC ကိုဘော့စ်နီးယားထဲပေးဝင်ဖို့ ဘယ်သူက စတင်ဖိအားပေးသလဲဆိုတာပါ။
အဲဒီဖိအား စတင်ရာနေရာဟာ ဖိုက်တာကြီးတွေစုနေတဲ့နေရာပါ။
မြို့ပြမှာရှိတဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေလဲကုန်ပြီ။ ကျေးလက်က ဘော့စ်နီးယန်းရွာတွေလဲ မရှိသလောက်ကုန်ပြီ။ နာဇီစတိုင်အကျဉ်းစခန်းတွေ၊ နာဇီထက်ဆိုးတဲ့ မုဒိန်းစခန်းတွေကိုလည်း တည်ဆောက်ပြီးပြီ။ ဆာဘ်တွေရဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ကတော့ အပြည့်အဝ အရှိန်ရသွားပါပြီ။ ကမ္ဘာကြီးကလဲ ဆာဘ်တွေရဲ့ ကျူးလွန်မှုကို နာဇီတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး မြင်ခဲ့ပါပြီ။
အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်မှုတားဆီးရေးအတွက် ပြတ်ပြတ်သားသားတစ်ခုခု ဆောင်ရွက်ပါတော့။ အမေရိကန်ကို နေရာတကာ ကန့်လန့်လုပ်တဲ့ ဆိုဗီယက်လည်းပြိုကွဲသွားပြီမို့ လုပ်စရာရှိတာကို ထိထိရောက် ရောက်လုပ်လို့ရပါပြီမဟုတ်လားဗျာ? မှန်ပါတယ်! ဒါဟာ သာမန်လူတွေရဲ့ အမြင်ပါ။
ဒါပေမဲ့ USအစိုးရဘက်က ပြန်ကြည့်ရင်တော့ ဆာဘ်တွေဘာလုပ်လုပ် US ကိုထိခိုက်နေတာမှ မဟုတ်တာ။ US တပ်တွေကို ဘောစ်နီးယားပို့လိုက်မှပဲ မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာပြီး US စစ်သားတွေသေတာကြေတာ ထိခိုက်တာတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။ ဒါဆို US အစိုးရက ဘာမှ မလုပ်တော့ဘူးလား…?
လူသားချင်းနာစာထောက်ထားမှု အကူအညီတွေကိုတိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီအကူအညီတွေကို တကယ်ဒုက္ခရောက်နေသူတွေလက်ထဲရောက် အောင်ပို့ပေးဖို့ အားထုတ်ပါတယ်။ ဆာဘ်တွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့မှုခံနေရတဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းမြို့တွေကို လေယာဉ်ပေါ်ကနေ ရိက္ခာချပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုလဲလုပ်ပါတယ်။ ဗြိတိသျှဦးဆောင်တဲ့ UN တပ်သား ၆ ထောင် ဝင်ရောက်တပ်စွဲဖို့ကိုလည်းကူညီပေးပါတယ်။
အကျဉ်းစခန်းတွေကို ဒီထက်မက ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခွင့်ရဖို့ သံခင်း တံမန်ခင်းဖိအားပေးပါတယ်။ ဗဟိုဆားဘီးယားအပါအဝင် ဆာဘ်တွေကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေလည်း ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာတွေက ကောင်းလား ဆိုတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကို ချေမှုန်းပစ်ဖို့ကိစ္စကိုတော့ ရှောင်လွှဲပြီးလုပ်နေတာမို့ သတ်ဖြတ်မှုတွေ မုဒိန်းမှုတွေဟာ ပပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အရှိန်အတန်ငယ်လျော့သွားတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။
စီနီယာဘုရ်ှအစိုးရဟာ ပျားရည်နဲ့ ဝမ်းချနေပြီလား ?
ဘော့စ်နီးယားသမ္မတ အလီဂျာ ကတော့ ၁၉၉၂ သြဂုတ်လမှာ စီနီယာ ဘုရ်ှကို တောင်းဆိုချက်တခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလီဂျာပြောခဲ့တာက “ဘော့စ်နီးယားကို US စစ်သားလူငယ်တွေ ပို့စရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာလည်း လူငယ်စစ်သားတွေရှိပြီးသားပါ။ ခက်တာက သူတို့လက်ထဲမှာ စစ်တိုက်စရာသေနတ်မရှိဖြစ်နေတာပါ။ အဓိကကတော့ UN ကချမှတ်ထားတဲ့ လက်နက်ပိတ်ဆို့မှု ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ပါ။ ဆားဘီးယားနိုင်ငံကတဆင့် လက်နက်တွေ အလျှံပယ်ရနေတဲ့ ဆာဘ်တွေအဖို့ လက်နက်ပိတ်ဆို့မှုက မထိရောက်ပေမယ့် ဘော့စ်နီးယန်းတွေအဖို့ကတော့ တကယ်ထိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘော့စ်နီးယန်းတွေကို လက်နက်တပ်ဆင်ပေးပါ။” စီနီယာဘုရ်ှကတော့ ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
ဘော့စ်နီးယားဝန်ကြီးချုပ် ဆလာဂ်ျကတော့ငိုရှာပါတယ်။ “ဒို့ဘော့စ်နီးယန်းတွေ ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ကနေ ပျောက်ကွယ်သွားလေတော့မလား” ဆိုပြီးငိုရှာပါသတဲ့။ သူငိုမယ်ဆိုလဲ ငိုလောက်စရာပါ။ နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ပိုင်း၊ အနောက်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းကို ရန်သူဆာဘ်တွေက သိမ်းပိုက်ထားပြီး တောင်ဘက်ပင်လယ်ပြင်မှာလည်း US ရေတပ်က ပိတ်ဆို့ထားကာ လာသမျှသင်္ဘောတွေမှာ လက်နက်ပါ/မပါ စစ်နေပါတော့တယ်။ ပါလာရင်လဲ သိမ်းဆည်းပစ်ပါတယ်။ UN ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းမှုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် လော့ဒ်အိုဝင်ကတော့ “Don’t, don’t, don’t dream” (အနောက်နိုင်ငံတွေက ကူညီလိမ့်မယ်လို့) အိပ်မက် မက်မနေကြနဲ့လို့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေကို သတိပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘော့စ်နီးယန်းမွစ်ဆလင်မ်တွေအဖို့ ကိုယ့်လက်ကိုယ့်ခြေနဲ့ ရုန်းကန်ရုံမှတပါး အခြားမရှိ ဖြစ်လေပြီလား။
ကျွန်တော်တို့လည်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းအတွင်းက ဆလာဂ်ျလို ငိုခဲ့ရတဲ့ရက်တွေရှိပါတယ်။ အဖိနှိပ်ခံလူမျိုးတိုင်းဟာ ဒီလိုတော်လှန်ရေး ရေချိန်နိမ့်ပါးတဲ့ အခြေအနေကို တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန် ဖြတ်ကိုဖြတ်သန်းရလေ့ရှိပါတယ်။ ဖိနှိပ်တဲ့ရန်သူအတွက်တော့ ဒီအချိန်ဟာ အသာစီးအရဆုံးအချိန်။ လုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့် အရဆုံးအချိန်ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီအချိန်ကို ကြံ့ကြံ့ခံကျော်လွှားနိုင်ပြီဆိုရင် အဖိနှိပ်ခံတွေဟာ ရန်သူရဲ့ လက်စတုံးသုတ်သင်ခံရမှုကနေ လွတ်မြောက်ပြီလို့ ဆိုနိုင်ပါပြီ။ ဒီလိုကြံ့ကြံ့ခိုင်ကျော်လွှားဖို့ အချက် ၂ ချက် အဓိကလိုပါတယ်။
၁။ မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း (အတွင်းအားစုခြင်း) နဲ့
၂။ မိတ်ဆွေကောင်းများ အခိုင်အမာတည်ဆောက်ခြင်း (အပြင်အားစုခြင်း)
ရန်သူကတော့ ဒီလိုအချိန်မှာ သုံးလေ့ရှိတဲ့နည်းဗျူဟာက –
၁။ အကြောက်လွန်၍ အထီးကျန်သွားစေပြီး လုံးဝဒူးထောက်သွားအောင်လုပ်ခြင်း။
၂။ စိတ်ထွက်ပေါက်ရှိရာလုပ်စေခြင်းဖြင့် အကြမ်းဖက်သမားလို့တံဆိပ်ကပ်ခြင်း။
မြန်မာပြည်က လူနည်းစုတွေအနေနဲ့ အထီးကျန်နေတာမရှိတော့ပါဘူး။
ကမ္ဘာ့လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တိုဟာ တွဲလက်တွေမြဲခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရေချိန်အကျဆုံးအချိန် အခက်ခဲဆုံးအချိန်ကိုတော့ ဖြတ်ကျော်လာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အကြောက်မလွန်ဖို့ရယ် စိတ်ထွက်ပေါက်အဖြစ်ထင်ရာလျှောက်မလုပ်ဖို့ရယ်သာ လိုပါတယ်။
၁၉၉၂ ဧပြီမှာ နိုင်ငံတကာက ဘောစ့်နီးယားနိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ အထင်က “ဒီလို ဘောစ့်နီးယားရဲ့လွတ်လပ်ရေးကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ဆာဘ်တွေကို ဟန့်တားရာရောက်မှာဖြစ်ပြီး စစ်ပွဲတစ်ခုကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်” ယူဆကြတာပါ။ အလီဂျာအပါအဝင် ဘောစ့်နီးယန်းခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလည်း ဒီလိုပဲထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ “တို့တွေ စစ်တိုက်ရမယ်ဆိုလဲ ခဏပေါ့။ နိုင်ငံတကာက တို့လွတ်လပ်ရေးကို အသိအမှတ်ပြုတာနဲ့တပြိုင်နက် အားလုံးပြေလည်သွားမှာပါလို့” တွေးထင်ခဲ့ကြတာပါ။
အထင်က အထင်၊ လက်တွေ့က လက်တွေ့ တခြားစီပါ။
ရှေ့မှာ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ဆာဘ်ဂျင်နိုဆိုဒ် ငရဲခန်းတွေ ဟာ ဘော့စ်နီးယန်း လွတ်လပ်ရေးကို ကမ္ဘာကအသိအမှတ် ပြုပြီးနောက်ပိုင်းမှာကို ဆက်ဖြစ်ခဲ့တာတွေပါ။ စီနီယာဘုရ်ှက အလီဂျာရဲ့ လက်နက်ပိတ်ဆို့မှု ပယ်ဖျက်ပေးရေးအဆိုကို ပယ်ချပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ အရာရာဟာနောက်ကျနေပြီလို့ တွက်ဆမိတဲ့ ဘောစ့်နီးယန်းတွေဟာ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက် ရုန်းကန်ကြရပါတော့တယ်။
လောလောဆယ် ဘောစ့်နီးယန်းတွေအဖို့ သေရေးရှင်ရေးလိုအပ်နေတာ လက်နက်နဲ့ခဲယမ်းပါ။ မွစ်ဆလင်မ်ဘောစ့်နီးယားစစ်တပ်အတွက် ပထမဆုံးလက်နက်ထောက်ပံ့တဲ့သူကတော့ ပြင်ပနိုင်ငံတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ဘောစ့်နီးယန်း အရပ်သားတွေကိုယ်တိုင်ပါ။ မအံ့သြပါနဲ့။ အဖြစ်က ဒီလိုပါ။
စစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းက ဘော့စ်နီးယားအလယ်ပိုင်းဟာ စက်မှုဒေသပါ။ တွင်ခုံလုပ်ငန်း၊ ဝပ်ရှော့လုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို တပိုင်တနိုင်ကနေ စက်မှုဇုံထောင်ပြီးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူတွေအများကြီးပါ။ အဲဒီ လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ အရပ်သားတွေဟာ စစ်လည်းဖြစ်လာရော စစ်လက်နက်ထုတ်လုပ်ရာ စက်မှုပညာသည်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ ရသမျှ သံတို သံစ၊ ကားအဟောင်း၊ စက်ဘီး၊ ကြေးပစ္စည်းတွေကို အရည်ကြိုတဲ့လူကကြို၊ တွင်ခုံ
မှာဖြတ်တောက်ပုံသွင်းသူကသွင်း၊ အချောသပ်သူကသပ်နဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေကို ထုတ်လုပ်ကြပေးကြပါတယ်။ ဒီလိုလက်နက်တွေနဲ့ ဆာဘ်တွေကို ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ လက်နက်အင်အားကွာလွန်းလှလို့ မွစ်ဆလင်မ်တွေဘက်က အသေအပျောက်ကလည်း မနည်းလှပါဘူး။
အလီဂျာအနေနဲ့ နောက်ထပ် လက်နက်လမ်းကြောင်းအသစ်ကိုရှာရပါ တယ်။ US ကတော့ ကမ်းတဲ့လက်ကို ပုတ်ချခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေဟာ မွစ်ဆလင်မ်တွေပါ။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မွစ်ဆလင်မ်နိုင်ငံတွေကတော့ အလီဂျာကို မျက်စလှမ်းပစ်နေကြပါပြီ။ ၁၉၉၂ အောက်တိုဘာမှာ အလီဂျာဟာ အီရန်ကိုသွားခဲ့ပြီး လက်နက်ကိစ္စအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါတယ်။
တကယ်က ဒီဆွေးနွေးပွဲ မတိုင်ခင်ကတည်းက အီရန်ဟာ ဘော့စ်နီးယန်းမွစ်ဆလင်မ်တွေကို လက်နက်ထောက်ပံ့နေပါပြီ။ ဥပမာ-၉၂ စက်တင်ဘာတုန်းက အီရန်ဘိုးအင်းလေယာဉ်တစ်စင်းဟာ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံမြို့တော် ဇာဂရဘ်လေဆိပ်မှာ ဆင်းသက်လာပါတယ်။ လေယာဉ်နဲ့ပါလာတာကတော့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းမွစ်ဆလင်မ်စစ်တပ် တံဆိပ်တပ်ထားတဲ့ ယူနီဖောင်းတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ UN ကသိသွားလို့ အကုန်သိမ်းဆည်းခံလိုက်ရပါတယ်။
ဒီလို သိမ်းဆည်းခံရအပြီးမှာတော့ အီရန်တွေဟာ ပိုမိုပါးနပ်တဲ့နည်းသုံးပြီးထောက်ပံ့ပါတယ်။ လက်နက်ချည်းပဲ ဒဲ့မပို့တော့ဘဲလူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားမှု အကူအညီပစ္စည်းတွေပို့တာပါ။ အဲဒီ ပစ္စည်းတွေကြားထဲမှာမှ လက်နက်ခဲယမ်းတွေ ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။
၁၉၉၂ နိုဝင်ဘာမှာ အီရန်ဆီက လူသားချင်းစာနာမှု ကုန်ပစ္စည်း ၆ တန်ရောက်လာပါတယ်။ အထဲမှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း လက်နက်ခဲယမ်းတွေပေါ့။ ဒီနည်းက အတော်ကို အဆင်ပြေပါသတဲ့။ အလီဂျာဟာ အီရန်နဲ့ ဆွေးနွေးအပြီး ဆော်ဒီနဲ့ တူရကီကိုလည်း ဆက်သွားပါတယ်။ ဆော်ဒီကတော့ သူလည်းပေးမယ် ဒါပေမဲ့ အီရန်ဆီက မယူဖို့တော့မှာပါသတဲ့။ အလီဂျာကတော့ ဆော်ဒီဆီကရော အီရန်ဆီကပါ ယူရပါတယ်။ သူတို့အတွက် ကောက်ရိုးတမျှင်လှမ်းဆုပ်လို့ရရင်လည်း လှမ်းဆုပ်ရမယ့် အနေအထားလေဗျာ။ တူရကီကတော့ လက်နက်ခဲယမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် တာဝန်ယူပေးပါမယ်တဲ့။ NATO အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက် တူရကီဟာ တချို့သောဂိတ်တွေ ကို မျက်စိမိတ်ပီးဖြတ်လို့ရသကိုး။ စစ်ပွဲအစပိုင်းမှာရန်သူကိုလျှော့တွက်မိတဲ့ အလီဂျာဟာခုချိန်မှာတော့ နိုင်ငံရေးကို ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ ကစားရပါတယ်။
၁၉၉၂ မေလမှာ JNA တပ်တွေကို ဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံအားကျူးကျော် သိမ်းပိုက်ထားတဲ့စစ်တပ်အဖြစ် အလီဂျာက ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ JNA တပ်တွေ ဟာ ဆာဘ်တွေပဲမို့ ဒီကြေငြာချက်က ဆာဘ်တွေကို အထိနာစေပါတယ်။
JNA တပ်တွေအနေနဲ့ သူတို့ခပ်တည်တည်နဲ့ အခြေချနေတဲ့ မြို့တွေကနေ ထွက်ခွာရပါတယ်။ ဆာဘ်တွေရဲ့ စစ်ဆင်ရေးအစီအစဉ်တချို့ဟာ ကမောက်ကမ ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဘော့စ်နီးယန်း မွစ်ဆလင်မ်တွေဘက်က တန်ပြန်ထိုးစစ်တရပ်ပြန်ဆင်နွှဲပြီး ဆာဘ်တွေလက်ထဲ က မြို့တစ်ချို့ကို ပြန်သိမ်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ဆားဘီးယားနဲ့ နယ်ချင်းကပ်နေတဲ့ ဘောစ်နီးယားအရှေ့ပိုင်းမှာ စတုရန်းမိုင် ၂၀၀ လောက်ကို ပြန်သိမ်းလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ စတုရန်းမိုင် ၂၀၀ ဟာ ပတ်ချာလည် ဆာဘ်တွေသိမ်းထားတဲ့ စတုရန်းမိုင်ထောင်ချီတဲ့ နယ်မြေထဲမှာ ငေါငေါလေးတိုးထွက်နေတဲ့ ဘော့စ်နီးယန်း ကျွန်းလေးလိုပါပဲ။ ဒီကျွန်းလေးပေါ်မှာတော့ ဘော့စ်နီးယားအရှေ့ပိုင်း ဆာဘ်ငရဲခန်းတွေကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ မွစ်ဆလင်မ်တွေ ခိုလှုံရာရခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီခိုလှုံရာတွေထဲ မှာမှ ဆရက်ဘရက်နီဆာဆိုတဲ့မြို့လေးမှာ ခိုလှုံသူတွေ အများဆုံးရှိနေပါတယ်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်ကိုပြန်ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဆာဘ်တွေလက်ချက်နဲ့ ဘော့စ်နီးယန်းတွေသေဆုံးတာ ၁ သိန်းကျော်သွားပါပြီ။ ပြည်တွင်းပြည်ပ ထွက်ပြေးရသူပေါင်း ၁ သန်းကျော်ရှိသွားပါပြီ။ ၁၉၉၂ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ US မှာ ကလင်တန်နဲ့ စီနီယာဘုရ်ှတို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်နေကြပါပြီ။ ကလင်တန်ကတော့ မဲဆွယ်ပွဲမှာ ဘုရ်ှရဲ့ မှားယွင်းတဲ့မူဝါဒကြောင့် ဘော့စ်နီးယားမှာ လူတွေအများကြီးသေနေရတယ်လို့ ထောက်ပြပါတယ်။
ဘော့စ်နီးယန်းမွစ်ဆလင်မ်တွေအဖို့ကတော့ ၁၉၉၂ ရဲ့ ဆောင်းတွင်းကိုနွမ်းပါးချို့ငဲ့စွာ အံကြိတ်ဖြတ်သန်းရင်း ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကလင်တန်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတွေ တောင်းပေးကြပါသတဲ့။
ဘော့စ်နီးယားကိစ္စဟာ ၁၉၉၅ မှာ NATO ဗုံးဝင်ကြဲမှပဲ ကိစ္စပြတ်သွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၉၂-၉၅ ကြားကာလမှာ မွစ်ဆလင်မ်နိုင်ငံတွေရဲ့ လက်နက်ထောက်ပံ့မှုကြောင့် ဘော့စ်နီးယန်းတွေ တောင့်ခံထားနိုင်တာကိုလည်းလျစ်လျူရှုလို့တော့မရပါဘူး။ US အစိုးရဟာ လက်နက်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ရင် အစဦးပိုင်းမှာ ပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီး အလယ်ပိုင်းမှာမျက်စိမှိတ်ပေးကာ ပြီးခါနီးမှာ US ကိုယ်တိုင် အားပေးပါဝင်တဲ့ အနေအထားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဆုံးသတ်မှာတော့ မွစ်ဆလင်မ် နိုင်ငံတွေရဲ့ လက်နက်တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ ဘော့စ်နီးယားတပ်မတော်ဟာ NATO ရဲ့ လေကြောင်းပစ်ကူရယူပြီး စစ်ပွဲကို အနိုင်နဲ့ပိုင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ (နောက်ပိုင်းမှာ ဒီအကြောင်းတွေ အသေးစိတ်ရေးထားပါတယ်။) လက်ရှိအနေအထားမှာလည်း မွစ်ဆလင်မ်နိုင်ငံတွေနဲ့ US ရဲ့ရပ်တည် ချက်ဟာ တသားတည်းဖြစ်နေပါပြီ။ ဂျင်နိုဆိုဒ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကို မေးလိုက် ချင်တာက… “အေးဆေးသက်သာ အဖမ်းခံမလား…? ပစ်ခတ်ပီးဖမ်းရမလား…?”
PreviousLeaked Pompeo statement shows debate over ‘genocide’ label for Myanmar